Emirà Arabo Mitambatra - Torolàlana ho an'ny Expats | Dubai & Abu Dhabi
Emirà Arabo Mitambatra - Torolàlana ho an'ny Expats
Asa amin'ny Bayt - No.1 vavahadin'ny asa any UAE
Septambra 27, 2019
Miasa any Dubai ho an'ny Poles - vola miditra, atolotra [+ vidiny, vola]
navoakan'ny Dubai City Company at Septambra 27, 2019
Ny Emira fahafito
The Arab Arab Emirates - Toromarika ho an'ny Expats. I Abu Dhabi no lehibe indrindra amin'ireo emirates fito izay manana faritra 67,340 kilometatra toradroa, mitovy amin'ny 86.7 isan-jaton'ny velarantany amin'ny firenena, tsy anisany ireo nosy. Izy io dia misy amoron-tsiraka miitatra mihoatra ny 400 kilometatra ary zaraina ho an'ny tanjona ara-pitantanana any amin'ireo faritra lehibe telo.
Ny faritra voalohany dia ahitana ny tanànan'i Abu Dhabi izay samy renivohitra ny emirate sy ny renivohitra federaly. Sheikh Zayed, Filohan'ny Emira Arabo Mitambatra dia mipetraka eto. Ny trano parlemantera izay nihaonan'ny Kabinetra federaly, ny ankamaroan'ny ministera sy ny andrim-panjakana federaly, ny masoivoho vahiny, ny fampielezam-baovao, ary ny ankamaroan'ny orinasan'ny solika dia hita ao Abu Dhabi, izay trano ihany koa ny Oniversite Zayed sy ny avo Kôlôjia ara-teknolojia.
Ny fotodrafitrasa lehibe indrindra dia misy an'i Mina (Port) Zayed sy Abu Dhabi International Airport. Manana toerana ara-kolontsaina, fanatanjahan-tena ary fialam-boly ihany koa ilay tanàna, miaraka amin'i Abu Dhabi Corniche izay mahatalanjona izay manolotra kilometatra kilometatra mety mandeha amin'ny bisikileta, bisikleta, jogne ary ny fitsangatsanganana an-tsambo eo amoron-dranomasin'ny nosy Abu Dhabi. Mahavariana ny fitenenana Architectural ny tanàna ihany koa toerana izay misy ireo trano taloha toy ny moske kely dia voatahiry ary mipetraka tsara eo aloky ny skyscraper maoderina futuristic.
Faritra faharoa Abu Dhabi, fantatra amin'ny hoe Atsinanana Atsinanana dia manana ny tanànany Al Ain renivohitra. Ity faritra lonaka ity dia manankarena maintso sy be tantsaha, zaridainam-panjakana ary toerana lehibe arkeolojika. Hotahina amin'ny loharanom-pahalalana lehibe ao anaty rano koa izy io, izay mameno ny lava-drano artesianina. Ny mahaliana manokana amin'ity faritra ity dia ny Kianja Ain Al Faydah, Jebel Hafit, zaridainan'ny fialam-boly ao Al Hili, Al Ain Zoo ary Museum Al Ain. Ity koa ny foibe ara-kolontsaina sy fanabeazana ary toeram-pianarana oniversite voalohany ao UAE, University of UAE, izay ahitana sekoly ara-pitsaboana marolony. Ny fiara fitaterana anatiny dia manamora ny tambajotra làlana mahafinaritra ary Al Ain dia mifandray amin'ny tontolo ivelany amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Al Ain.
Emirà Arabo Mitambatra - Torolàlana ho an'ny Expats!
Ny Faritra Andrefana ao amin'ny UAE
Ny Faritra Tandrefana, ny sehatry ny fitantanana fahatelo ao emirate, dia misy ny tanàna 52 ary manana an'i Bida Zayed renivohitra, na Zayed City. Mandrakotra hekitara 100,000 farafahakeliny, mitambatra, fara fahakeliny, mihoatra ny 20 tapitrisa evergreens. Eto, ny tokan-tsolika lehibe indrindra an'ny firenena dia any, toy ny refin-tsolika lehibe indrindra ao amin'ny firenena, ao amin'ny Al Ruwais.
Ho fanampin'ireo faritra telo any amin'ny tanibe Abu Dhabi dia misy nosy lehibe misy ao anatin'ny emirate anisan'izany ny Das, Mubarraz, Zirku ary Arzanah, akaikin'ny toerana misy ny tanimbary any ivelany. Ny tanàna akaiky indrindra dia Dalma, Sir Bani Yas, Merawah, Abu al-Abyadh ary Saadiyat, miaraka amina nosy maro hafa.
Ny Emirain'ny Dubai miitatra manaraka ny morontsiraka Arabo any UAE mandritra ny kilometatra 72. Dubai dia manana faritra iray c. 3,885 kilometatra toradroa, izay mitovy amin'ny 5 isan-jaton'ny velarantany amin'ny firenena, tsy anisany ireo nosy.
Tanànan'i Dubai namboarina teo amoron'ny sisin'ny 10 tery kilometatra lava sy andiam-drivotra manelanelana ny faritra atsimon'i Bur Dubai, ny fon'ny tanàna nentin-drazana, avy amin'ny faritra avaratry Deira.
Ny biraon'ny Ruler, miaraka amin'ireo birao lehiben'ny orinasa lehibe, Port Rashid, ny Dubai Trade Trade Center, fomba amam-panao, onjam-peo sy ny paositra dia samy mipetraka any Bur Dubai avokoa. Deira dia foibe ara-barotra miroborobo izay misy toeram-pivarotana lehibe, tsena, hotely ary seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Dubai. Bur Dubai sy Deira dia nampifandraisan'i Al Maktoum sy Al Garhoud tetezana, ary koa ny tonelina Al Shindagha izay mandalo eo ambanin'ny riaka.
Jebel Ali, fonenan'ny seranan-tsambo lehibe iray, no manana varotra ara-barotra lehibe indrindra any Arabia manangana lisitr'ireo orinasa iraisam-pirenena mitombo hatrany izay mampiasa ny faritra ho an'ny fanamboarana ary ho toerana famerenam-bola.
Ny morontsiraka Jumeirah dia faritra fizahan-tany lehibe izay misy trano fandraisam-bahiny ahazoana mari-pankasitrahana marobe ary tolotra ara-panatanjahantena.
Tany afovoan-tany, tanàna kely avaratr'i Hatta no toerana mahafinaritra azy. Mifanaraka amina fitahirizan-drano farihy iray, ny Hatta Fort Hotel dia napetraka ao amin'ny zaridainam-panjakana be dia be ary manome toerana mety tsara handinihana ireo vatan-javaboary sy tendrombohitra eo akaikiny, izay mipaka hatrany amin'ny faritanin'i Omani.
Ny Emirate of Sharjah dia mivezivezy amin'ny halaviran'ny 16 kilometatra amin'ny morontsiraky ny morontsirak'i UAE ary mihoatra ny kilometatra 80 mankany anatiny. Ho fanampin'izany, misy andevo telo an'i Sharjah izay eo amin'ny morontsiraka atsinanana, mifanolotra amin'ny Hoalan'i Oman. Ireo dia Kalba, Khor Fakkan sy Dibba al-Husn. Ny emirate dia manana faritra 2,590 kilometatra toradroa, izay mitovy amin'ny 3.3 isan-jaton'ny velarantany amin'ny firenena, tsy anisany ireo nosy.
Ny renivohitr'i Sharjah, izay tsy mijery ny Golfa Arabo, dia ahitana ny foibem-pitantanana sy ara-barotra lehibe miaraka amin'ny tetikasa kolontsaina sy nentim-paharazana mahavariana, ao anatin'izany ny tranombakoka marobe. Ny tsipika miavaka dia ireo souqs roa rakotra lehibe, taratry ny endrika Silamo; toeram-pialam-boly sy toeram-pivarotana maro toa ny Al Jazeirah Fun Park sy i Al Buheirah Corniche. Ny tanàna dia hita ho an'ireo moske kanto maro be ao aminy. Ny fifandraisana miaraka amin'ny tontolo ivelany dia nomen'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sharjah sy Port Khalid.
Sharjah koa dia ahitana faritra oasis manan-danja sasany, ny malaza indrindra dia i Dhaid izay ahitana legioma sy voankazo marobe manondraka azy amin'ny tany manankarena sy mahavokatra azy. Khor Fakkan dia manome an'i Sharjah seranan-tsambo lehibe atsinanana. Ny nosy roa amoron-dranomasina dia an'i Sharjah, Abu Musa, izay notarihin'ny tafika an'i Iran hatramin'ny 1971, ary i Sir Abu Nu'air.
Ajman, izay any amin'ny morontsiraka avaratr'i Sharjah renivohitra, dia misy onjam-pasika tsara tarehy 16 kilometatra tsara tarehy. Emirate kely izy raha jerena ny haben'ny vatany, mandrakotra ny 259 kilometatra toradroa, izay mitovy amin'ny 0.3 isan-jaton'ny velarantany amin'ny firenena, tsy anisany ireo nosy.
Ny renivohitra Ajman, dia manana tanàna mimanda manan-tantara eo afovoany. Nanavao ny zava-misy vao haingana io ary manorina tranom-bakoka mahafinaritra. Ho fanampin'ny biraon'ny Ruler, orinasa isan-karazany, banky ary foibe ara-barotra, ny Emirate koa dia voatokana amin'ny seranan-tsambo voajanahary izay misy ny Port of Ajman. Masfut dia vondron'ny fambolena izay hita any an-tendrombohitra 110 kilometatra mankany atsimoatsinanan'ny tanàna, fa ny faritr'i Manama dia eo amin'ny 60 kilometatra any atsinanana.
Ny Emirate of Umm Al Qaiwain, izay manana sisin-dranomasina mirefy 24 kilometatra, dia eo amoron'ny morontsiraka Arabo any UAE, eo anelanelan'i Sharjah ka hatrany atsimo andrefana, ary Ras al-Khaimah mankany avaratra-atsinanana. Ny sisin-taniny anatiny dia eo amin'ny 32 kilometatra miala ny morontsiraka. Ny velon-tanin'ny emirate dia manodidina ny 777 kilometatra toradroa, izay mitovy amin'ny 1 isan-jaton'ny isan-jaton'ny faritra, tsy anisany ireo nosy.
Ny tanànan'i Umm Al Qaiwain, renivohitr'ilay emirate, dia eo amin'ny saikinosy tery tery izay misy manodidina ny kilometatra 1 kilometatra sakany 5 kilometatra ny halavany. Ny biraon'ny Ruler, foibe ara-pitantanana sy ivom-barotra, seranan-tsabo lehibe sy ivon-toeram-pikarohana mariktiana izay amboarina ny gony sy ny hazandrano amina fanandramana. Ny tanàna dia manana ny sisa tavela amin'ny fiarovana taloha, ny vavahadin'izy ireo lehibe voahodidin'ny tafondro mpiaro.
Falaj al-Mualla, oasis voajanahary manintona dia hita ao amin'ny 50 kilometatra atsimoatsinanan'ny tanànan'i Umm Al Qaiwain. Ny nosy Sinayah, ny fivoahana lavitra eo ampitan'ny tanàna dia misy faritra manan-kafe manan-danja miaraka amin'ny zanaky ny cormorante Socotra.
Ras Al Khaimah, ilay avaratry ny morontsiraka andrefan'i UAE dia manana morontsiraka amoron-dranomasina manodidina ny 64 kilometatra any amin'ny Helodrano arabo, tohanan'ny tany mahavokatra, miaraka amina rindrina mitokana eo afovoan'ny tendrombohitra Hajar mankany atsimo. Ireo faritra roa amin'ny emirate dia mizara sisintany amin'ny Sultanate of Oman. Ho fanampin'ny faritry ny taniny, Ras Al Khaimah dia manana nosy maromaro ao anatin'izany ny Greater and Lesser Tunb, nalain'ny Iran nanomboka tamin'ny 1971. Ny faritry ny emirate dia 168 kilometatra toradroa, izay misy ny 2.2 isan-jaton'ny velarantany amin'ny faritany, tsy anisany nosy.
Ny tanànan'i Ras Al Khaimah dia mizara roa ho an'i Khor Ras Al Khaimah. Ao amin'ny faritra andrefana, fantatra amin'ny anarana hoe Ras Rasz Khaimah taloha, dia ny Mozom-pirenena Ras Al Khaimah ary departemanta iraisan'ny governemanta. Ny ampahany atsinanana, fantatra amin'ny anarana hoe Al Nakheel, dia mipetraka ao amin'ny biraon'ny mpanapaka, departemanta maro an'ny governemanta sy orinasam-barotra. Ireo fizarana roa ireo dia ampifandraisan'ny tetezana lehibe miorina manerana ny khor.
Khor Khuwayr dia faritra indostrialy izay misy eo amin'ny kilometatra 25 any avaratry Ras Al Khaimah. Ho fanampin'ny orinasa simenitra, fasana ary marbra, izany koa ny toeran'ny Port Saqr, ny seranan-tsambo lehibe ho an'ny emirate sy ny distrikan'ny fanjonoana Rams. Ny distrikan'i Digdagga, amin'ny lafiny iray, dia faritra fambolena fanta-daza ary mipetraka ao amin'ny orinasa fivarotam-panafody Julphar, ny lehibe indrindra ao amin'ny helodrano arabo.
Ny ivon-toerana lehibe hafa ao anatin'ny emirate dia: Al-Hamraniah, foiben'ny fambolena ary koa ny toerana ho an'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ras Al Khaimah, Khatt, toerana fizahan-tany izay malaza amin'ny fantsom-panavotany, Masafi izay malaza amin'ny fambolena sy fantsakan'ny voajanahary. ary Wadi al-Qawr, lohasaha mahaliana ao amin'ireo tendrombohitra atsimo.
Raha ny firafitra kely an'i Sharjah dia i Fujairah ihany no hany emirate mipetraka eo amin'ny helodranon'i Oman. Maherin'ny 90 kilometatra ny halavany ary ny toerana stratejika dia nitana toerana lehibe tamin'ny fampandrosoana. Ny faritry ny emirate dia 1165 kilometatra toradroa, izay misy ny 1.5 isan-jaton'ny velarantany amin'ny faritany, tsy anisany nosy.
Ny tanànan'i Fujairah, renivohitry ny emirate, dia foibe iray mivoatra haingana izay misy ny biraon'ny mpitondra, departemanta governemanta, orinasa orinasa maro ary trano fandraisam-bahiny maro, ary koa seranam-piaramanidina sy Port of Fujairah, iray amin'ny fitrandrahana solika ambony indrindra eran-tany. seranan-tsambo.
Ny endri-javatra ara-batana ao amin'ny emirate dia aseho amin'ireo tendrombohitra lehibe Hajar izay manamorona ny lemaka amoron-tsiraka izay misy ny ankamaroan'ny tanàna. Nahatsapa fijerena zava-mampientam-po i Fujairah dia napetraka tsara hanohizana ny asa amin'ny fizahan-tany fizahan-tany. Ny mahasarika dia ahitana ny valan-javamaniry mahavariana sasany, ny hakanton'ny voajanahary eny an-tendrombohitra sy amoron-tsiraka, ny zava-bita ara-kolontsaina sy ara-tantara ary, mazava ho azy, tara-masoandro mafana.
Ny tanàna manan-tantara ao Dibba al-Fujairah, any amin'ny farany avaratra amin'ny emirate, dia ivon-toerana manan-danja ho an'ny fambolena sy ny jono, raha ny tanànan'i Bidiya dia manana trano fivavahana manana ny tokana mampiavaka azy izay tranainy indrindra amin'ny firenena.
Inona no mitranga raha misoratra anarana ianao Dubai City Company
Ny Governemanta UAE
Eo ambanin'ny rafitry ny governemanta UAE, ny filohan'ny federasiona dia voafidy iray izay fantatra amin'ny anarana hoe Filankevitra ambony ambonin'ireo mpanapaka. Ny Filan-kevitra ambonimbony dia ny rafitra mpanamboatra pôlitika any UAE, ary ny filoha sy ny filoha lefitra dia samy voafidy amin'ny maha-mpikambana azy hanavao ny fe-potoana dimy taona.
Ny Council Council dia manana fahefana mpanao lalàna sy mpanatanteraka. Ho fanampin'ny drafitra sy ny fankatoavana ny lalàna federaly, ny Filankevitra Ambony dia mankatoa ny praiminisitra voafidy ho an'ny filoham-pirenena ary vonona ny hanaiky ny fialany izy, raha takiana.
Ny praiminisitra no notendren'ny Filoha. Avy eo izy dia manendry Filankevitry ny minisitra, na kabinetra, hanara-maso ny fampandrosoana sy ny fanatanterahana ny politikam-panjakana manerana ny portfolio rehetra.
Ho fanampin'ny Filankevitra ambony sy ny filankevitry ny minisitra, ny parlemanta mpikambana 40 izay fantatra amin'ny hoe Federal National Council (FNC) dia mandinika ny lalàna vaovao natolotra ary manome torohevitra ho an'ny Kabinetra UAE, araka ny takiana. Ny FNC dia omena hery hiantsoana sy hanontany ireo Minisitra mikasika ny asany manokana, manome ny fandraisana andraikitra fanampiny amin'ny rafitra. Ny fivoaran'ny fandrosoana hanokafana ny fanapaha-kevitra dia natao tamin'ny volana Desambra 2006, niaraka tamin'ny fifidianana voalohany tsy an-kiato nataon'ny mpikambana FNC. Talohan'izay, ny mpikambana rehetra ao amin'ny FNC dia notendren'ny Mpitondra isaky ny Emirate.
Ny fampidirana fifidianana tsy ankolafy dia fanombohan'ny dingana iray hanavaozana ny rafitry ny governemanta UAE. Ao anatin'ireo fanavaozana ireo, ny isam-pitondran-tena tsirairay dia misafidy oniversite misafidy izay amn'ny 100 ny isan'ny mpikambana ao amin'ny FNC izay mitazona an'io Emirate io. Ny mpikambana ao amin'ny oniversite tsirairay avy eo dia mifidy ny antsasaky ny mpikambana FNC, ny antsasany kosa dia manohy voatendry ho an'ny Mpitondra tsirairay. Niteraka FNC ny fizotrany ary vehivavy ny ampahadimin'ny mpikambana ao aminy.
Ny hetsika amin'ny ho avy dia andrasana amin'ny fanitarana ny haben'ny FNC sy hanamafisana ny fifaneraserana eo aminy sy ny filankevitry ny minisitra, hanatsarana bebe kokoa ny fahombiazana, ny fandraisana andraikitra ary ny fandraisana anjara amin'ny governemanta ao amin'ny UAE. Tamin'ny volana Novambra 2008, ny fe-potoana ho an'ny mpikambana FNC dia nitarina hatramin'ny roa ka hatramin'ny efatra taona, izay mifanaraka tsara amin'ny parlemantera hafa eto amin'izao tontolo izao. Ankoatr'izay, ny governemanta dia hitatitra amin'ny FNC momba ny fifanarahana iraisam-pirenena atolotra sy ny fifanarahana, ary ireo fifanarahana ireo dia horesahan'ny FNC alohan'ny hamerenany azy ireo.
Ara-tantara, ny tontolo ara-politika ao amin'ny UAE dia voasaraky ny fitiavana ny firohan'ny mpitondra sy ny andrim-panjakana. Izany dia ampahany betsaka amin'ny valin'ny fitomboana haingana sy fampandrosoana izay niainan'ny UAE teo ambany fitarihany tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny tantara sy lova UAE
Noraisin'ilay lehilahy ilay tany fantatra ankehitriny hoe Emirates Arabo Mitambatra (UAE) nandritra ny an'arivony taona maro, ary, tokoa, mety nanana anjara toerana lehibe tamin'ny faritra nifindra tany Afrika ho any Azia ilay faritra. Rehefa nandeha ny fotoana dia niova be ny tontolo iainana. Manodidina ny 7500 taona lasa izay, tsy dia milamina ihany ny toetrandro ary misy porofo lehibe misy eo amin'ny fibodoana olombelona, ​​fa tamin'ny 3000 BC talohan'izay dia niharatsy kokoa ny toe-piainan'ny XNUMX BC, ka ny fambolena dia natokana ho an'ireo vondron'olona oasis mahery vaika.
Ny varotra enta-barotra dia natsangana hatrany am-boalohany ary ny varahina dia naterina avy any amin'ny Tendrombohitra Hajar ka hatrany afovoan-tanàna any avaratra raha vao tamin'ny 3000 talohan'i SM, izay niainga tany Mesopotamia. Ny lalan'ny kamela namakivaky ny faritra avy any avaratra ka hatrany atsimo no nanome lalana hafa mankany India. Ny seranan-tsambo toa an'i Julfar (Ra's al-Khaimah) taty aoriana dia lasa mpangataka miroborobo, noho ny varotra mivangongo.
Tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo, ny fahatongavan'ireo Portiogey tany amin'ny Golfa dia niteraka fikorontanana lehibe ho an'ireo seranan-tsambo atsinanana toa an'i Dibba, Bidiyah, Khor Fakkan ary Kalba. Na izany aza, tamin'ny fiandohan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, ny foko eo an-toerana, Qawaisim, dia nanangana sambo fiaramanidina lehibe enina amby enimpolo sy ireo tantsambo 20,000 - ampy mba hampahatezitra ny Anglisy iray manafintohina ny fifehezana ny lalan'ny varotra an-dranomasina eo anelanelan'ny Golfa sy India.
Source Souks an'ny Old Dubai
Tamin'ny voalohan'ny 1790, ny tanànan'i Abu Dhabi dia lasa foiben-jaza iray manan-danja tokoa ka ny mpitarika ny foko Bani Yas, ny sheikh an'ny Al Bu Falah (izay taranany, Al Nahyan, no mpitondra an'i Abu Dhabi ankehitriny), nifindra tany avy tao Liwa Oasis, sasany kilometatra 150 mankany atsimo-andrefana. Taona am-polony taona maro taty aoriana, ny mpikambana ao amin'ny Al Bu Falasah, sampana iray hafa an'ny Bani Yas, dia natsangan'ny creek tany Dubai, ary mbola manohy manjaka ankehitriny ry fianakaviana Al Maktoum.
Nanohy niroborobo ny jono Voahangy, nefa ny Ady Lehibe Voalohany, ny fahakiviana ara-toekarena tamin'ireo 1930s, ary ny fanintonana Japoney momba ny perla kultoun dia nampirongatra ny varotra - nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny toekaren'ny faritra.
Miaraka amin'ny 1950 anefa, dia ny fahitana solika, ary tamin'ny 6 Aogositra 1966, ny Highness (HH) Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan dia lasa mpanapaka an'i Abu Dhabi. Noho izany dia nanomboka vanim-potoana drafitra sy fampandrosoana lehibe, izay nahitan'i Abu Dhabi, ary tamin'ny farany, ny UAE manontolo, nanomboka ny fanavaozana sy tanjaky ny toe-karena. Tamin'ny 2 Desambra 1971, ny federasiona federaly amin'ny fanjakana enina fantatra amin'ny hoe Emirà Arabo Mitambatra dia naorina tamin'ny fomba ofisialy. Anisan'izany i Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, ary Fujairah. I Sheikh Zayed dia voafidy ho filoha ary HH Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, mpitondra ao Dubai, ho filoha lefitra. Ny emirate fahafito, Ra's al-Khaimah, dia niditra tao amin'ny Federasiona tao 1972.
Tsy misy isalasalana fa ny firoboroboana, ny firindrana ary ny fandrosoana maoderina izay mampiavaka ny Emira ankehitriny dia, mitongilana tokoa, noho ny anjara asan'ireo ray aman-dreny mpanorina ny faritra. Tao amin'ny 2004, i Sheikh Zayed dia nandimby azy ho Filohan'ny UAE ary amin'ny maha-Mpanjakan'i Abu Dhabi azy lahimatoany, HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Ny fotokevitra sy filozofia nentiny ho an'ny governemanta kosa, dia mitoetra ao am-pon'ny Federasiona sy ny politikany ankehitriny. Taorian'ny nahafatesan'ny rahalahiny, Sheikh Maktoum, tao 2006, i HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mpitondra ao Dubai, dia voafidy ho filoha lefitra sy praiminisitra UAE.
Loharano: Diary UAE2010 - Filankevitra ho an'ny haino aman-jery UAE
Ny mpitarika ara-politika ao amin'ny UAE dia miasa ao anatin'ny rafitry ny politika malalaka izay napetraky ny filohan'ny federasiona, HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Io fomba fiasa io dia manamafy ny diplaoma, ny fifampiraharahana ary ny fangorahana. Ny UAE dia mahatsiaro ny fandraisany andraikitra amin'ny mpiara-monina aminy sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena momba ny fandriampahalemana, fahamarinan-toerana ary filaminana ho an'ny rehetra. Ho fanatrarana ireo tanjona ireo dia nanentana tamina tetezana, fiaraha-miasa ary fifanakalozan-kevitra izany. Ny fiankinan-doha amin'ireo fitaovam-pifandraisana ireo dia mamela ny Governemanta hikatsaka fifandraisana mahomby sy mandanjalanja ary marobe amin'ny fiaraha-monina iraisam-pirenena.
Ny fitsipika matanjaka amin'ny politika vahiny ao amin'ny UAE dia ny finoana ny ilana fahamarinana amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena eo amin'ny fanjakana, ao anatin'izany ny filàna manaja ny fitsipiky ny tsy fitsabahana amin'ny raharaham-panjakan'ny firenen-kafa. Ny UAE dia manolo-tena amin'ny famahana ny fandriam-pahalemana amin'ny fifandirana, ary manohana andrim-panjakana iraisam-pirenena hanamafy ny lalàn'ny lalàna iraisam-pirenena sy fanatanterahana ny fifanarahana sy fifanarahana.
Iray amin'ireo ivon-doha amin'ny politika ivelany any UAE dia ny famoronana fifandraisana akaiky amin'ireo mpifanila trano aminy ao amin'ny Saikinosy Arabo amin'ny alàlan'ny filankevitry ny fiaraha-miasa amin'ny Golfa (GCC) misy mpikambana. Nandritra ny 2009, ny fivoarana any Palestina, Irak, Iran, Yemen, Afghanistan ary Pakistan ary ny hetsika izay ilaina mba hiatrehana azy ireo dia ny fototry ny fifampiresahana UAE amin'ireo mpitondra eran'izao tontolo izao. Ny UAE dia natokana ho an'ny fandriampahalemana, filaminana ary fitoniana ao amin'ny faritra Arabo, ary koa ny fanavaozana ny fifandraisana eo amin'ny firenena rehetra, ary vahaolana maharitra sy maharitra amin'ny ady any Atsinanana. Mino fa tsy ho tratrarina ny fandriampahalemana raha mitohy ny fanjakan'ny Palestiniana sy ny faritany Arabo hafa. Manohana ny famaranana ny fanjanahana israeliana sy ny fananganana fanjakana Palestiniana mahaleo tena, ary i East East ho renivohiny, ao anatin'ny tontolon'ny fifanarahana mifototra amin'ny Arab Peace Initiative.
Ny UAE dia niangavy mafy ny hetsika iraisampirenena hanafaka ny fananganana toeram-ponenana jiosy any amin'ny Tandrefana sy Jerosalema amin'ny fikasana hamelona indray ny fizotry ny fandriampahalemana any Atsinanana. Nandritra izany fotoana izany dia nanameloka ny herisetra israeliana tao Gaza ary naneho firaisankina miaraka amin'ny Palestiniana voakasik'ilay ady. Ny UAE dia nanolotra vola mihoatra ny Dh11 lavitrisa (US $ 3bn) ho fanampiana ny Palestiniana, ao anatin'izany ny vola fampandrosoana ho an'ny fotodrafitrasa, trano, hopitaly ary tetikasa an-tsekoly. Ankoatr'izay, ny firenena dia nanolotra Dh638.5 tapitrisa (US $ 174mn) ho fanarenana ao Gaza.
Ny UAE dia mpanohana mavitrika ny governemanta Irak ary nanentana ny fanajana ny tsy fivadihan'ny faritany ao Irak, ny fiandrianany ary ny fahaleovantenany. Ny Federasiona dia manana iray amin'ireo masoivoho arabo vitsivitsy sy masoivoho monina any Baghdad, ary nofoanana ny trosa mitentina Dh25.69 lavitrisa (US $ 7bn) hanohanana ny ezaka fanarenana indray an'i Irak. Na dia eo aza ny fifandirana efa ela teo amin'i Iran noho ny fanontanian'ireo nosy telo any UAE sy ny ahiahy momba ny programa nokleary Iraniana, ny UAE dia nanohy ny fantsom-pifandraisana nahomby izay mety hiteraka mekanika ho an'ny fananganana fitokisana sy famahana ny filaminana milamina. olana miavaka. Ny federasiona dia manohy mandray anjara amin'ny ezaka iraisam-pirenena amin'ny tanjona hanamafisana an'i Afghanistan sy hanohana ny tolo-dalàna hamerenana ny filaminana. Nanome US $ 550 tapitrisa fanampiana ho fanampiana olona sy fampandrosoana eo anelanelan'ny 2002 sy 2008 ary io ihany no firenena Arabo manatanteraka asa fanatanjahantena eto an-tany.
Ankoatry ny faritra, ny politikam-pirenen'i UAE dia manohy mampifanaraka ny fiovana eo amin'ny fiaraha-monina manerantany. Ao anatin'ny fomba fijeriny fatratra, mampiorina fifandraisana roa sy multilateral miaraka amin'ireo firenena manerantany ary mandroso izy io ary manamafy ny fifandraisana amin'ireo mpiara-dia aminy taloha any Andrefana. Ny lafiny iray manan-danja amin'ny politikam-pirenen'i UAE dia manome lanja lehibe ny fikolokoloana ny fanitarana ny rohy ara-barotra sy ny fampiasam-bola amin'ny firenena sy andrim-panjakana manerantany. Ny toerana fivoaran'ny Federasiona ho toy ny toerana ara-bola ho an'ny faritra Afovoany Atsinanana dia nanamafy sy nanamafy orina ny toerany ho mpikambana ao amin'ny fiarahamonina manerantany.
Satria i Azia nanandrana ny krizy ara-toekarena tato ho ato am-pahombiazana noho ny faritra hafa eran-tany, dia maro ny fanamarihana fa ny sasany amin'ireo firenena lehibe any Azia dia manana anjara toerana lehibe kokoa eo amin'izao tontolo izao politika. Manala ny fihetsehana, ary maneho ny faniriana hanamafy orina ny fifandraisana, ny mpitarika ny UAE dia nanohy ny fifandraisany tamin'ny firenena maro any Azia, anisan'izany i Shina sy India. Ny fahombiazan'ny diplaomatika lehibe iray nandritra ny 2009, izay hita taratra ihany koa ny toe-piainana iraisam-pirenena mitombo dia tonga rehefa nofidina i Abou Dhabi hampiantrano foiben'ny Ivotoerana Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena vaovao (IRENA).
Ny UAE dia namoaka antontan-taratasy politika momba ny angovo nokleary ho an'ny sivily, mampiasa ny fanamafisana ny politikany mangarahara sy ny fahavononany hanaraka ireo fepetra rehetra mifandraika sy fiarovana. Nandritra izany fotoana izany, ny Birao Governemanta misahana ny angovo iraisam-pirenena Atomika dia nanaiky ny fankatoavana ny UAE momba ny fepetra fanaraha-maso nokleary fanampiny fantatra amin'ny anarana hoe Protocol Tambahan, izay miantoka ny fanoloran-tena amin'ny Fifanarahana Tsy Mitombo Nokleary. Faritra iray lehibe amin'ny fiaraha-miasa UAE dia ny ady maneran-tany hiadiana amin'ny fampihorohoroana, ao anatin'izany ny fampihorohoroan'ny fanjakana.
Na eo aza ny fiantraikan'ny krizy ara-bola sy toekarena amin'ny tetik'asa ara-toekarena sy fampandrosoana momba ny faritra, ny UAE dia nanohy ny fandaharan'asa fanampiana amin'ny maha-olombelona azy sy ny fanampiana ary ny fampandrosoana any amin'ny firenena maro. Ny ezaka nataony tamin'io lafiny io dia neken'ny sekretera jeneralin'ny ONU Ban Ki-moon, izay nidera ny dikan'ny maha-olombelona sy ny asany amin'ny fanalefahana ny fijalian'ny olona amin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao mandritra ny loza voajanahary sy ny adin'olombelona.
Ny fanampiana dia alefa amin'ny alàlan'ny fikambanan'ireo vondrona lehibe, toy ny Abu Dhabi Fund for Development izay, nandritra ny 2009, dia nanohana tetikasa tany Maroc, Burkina Faso, Tanzania, Bangladesh, Palestine, Benin, Yemen, Afghanistan, Sudan, Eritrea sy ny hafa; ny Red Crescent Authority (iray amin'ireo vondrona mpikambana folo ambony indrindra ao amin'ny Komitin'ny Iraisam-pirenena Mena Hafa), izay ny asa mahomby indrindra dia ny fanomezana rano fisotro any amin'ireo firenena tratry ny hain-tany sy ny famoahana azy, ary ny fametrahana hopitaly any amin'ny faritra lavitra any amin'ireo firenena tsy dia mahita, ary nifantoka indrindra tamin'ny fampianarana ny ankizy any amin'ny firenena mahantra. Ankoatr'izay, Noor Dubai, hetsika iraisam-pirenena fiantrana ho an'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny fahajambana sy ny fahitana ambany dia miara-miasa amin'ny World Health Organisation sy ny International Agency for the Prevention of Blindness. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny fanamafisana dia ny fanampiana fanampiana ho an'ny olona tratran'ny loza voajanahary na fifandirana ary fahantrana.
Amin'ny ankapobeny, nandritra ny am-polo taona sy tapany farany, ny UAE dia nandray anjara mihoatra ny Dh255 lavitrisa (US $ 69.4 bn), amin'ny fampindramam-bola, fanomezana sy fanampiana dia omen'ny governemanta-to-governemanta, ny federasiona koa dia mpandray anjara lehibe amin'ny masoivoho iraisam-pirenena, rehefa nanao Dh100 lavitrisa (US $ 27 bn) azo alaina amin'ny alàlan'ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena sy ny Banky Iraisam-pirenena. Ny Birao Iraisampirenena fanampiana any UAE, izay niara-niasa tamin'ny Office of UN ho an'ny Coordination of Humanitarian Affairs, dia forum iray vao noforonina izay hitarika ho an'ny Federasiona ho tafiditra bebe kokoa amin'ny fanampiana ny haino aman-jery maro, fa tsy hifantoka amin'ny fanohanana amin'ny alàlan'ny bilateraly nentim-paharazana. dia midika hoe.
Na eo aza ny zava-misy fa ny UAE izao dia eo am-pandehanana tsy tapaka, dia nisy fiantraikany lehibe tamin'ny krizy ara-toekarena tato ho ato. Na eo aza ny kobika voalohany noforonina tamin'ny vidin'ny solika avo, ny Federasiona dia tratran'ny fihenan'ny fihodinan'ny tany maneran-tany izay nitarika ny fihenan'ny solika, nitarika ny vidiny ho latsaky ny ampahatelon'ny faran'ny volana Jolay 2008. Ny fihodinan'ny fidiram-bolan'ny renivohitra tsy miankina dia nahatonga ny fihenan'ny fihenan'ny vidin'ny stock-market. Ankoatr'izay, ny fihenan'ny sehatry ny fananganana sy ny fananana, mivelatra amin'ny fivoaran'ny toe-karena any UAE, dia midika fa nihanalefaka ny fitomboana tao 2009 tamin'ny taona lasa. Tamin'ny volana Oktobra 2009, ny minisitry ny toekarena dia naminavina ny fisondrotana 1.3 isan-jato fotsiny amin'ny taona.
Ny tarehimarika ho an'ny 2009 dia nifanandrify tamin'ny 2008, raha nitombo ny vokatra indostrian'ny vokatra lehibe (GDP) any UAE, ny 7.4 isan-jato. Ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny entona dia ny sehatry ny solika sy ny entona, izay nitombo ny 35.6 isan-jato, noho ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Ny sehatry ny fitomboana mahery vaika hafa ao amin'ny 2008 dia nahitana ny indostrian'ny fananganana (26.1 isan-jato), ny indostrian'ny famokarana (17.2 isan-jato), ny sehatra ara-bola (15.9 isan-jato), ny varotra varotra sy fanamboarana fivarotana (18.7 isan-jato), ary ny trano fisakafoanana sy varotra trano fandraisam-bahiny (15.1 isan-jato).
Ao amin'ny 2008, ny fifandanjana ara-barotra UAE dia nitombo ny 35.3 isan-jato, avy amin'ny Dh170.85 lavitrisa (US $ 46.5 bn) amin'ny 2007 ka Dh231.09 miliara (US $ 62.9), noho ny fiakaran'ny 33.9 isan-jato isan-jaton'ny vidin'ny fanondranana sy ny fanondranana indray. ary ny 39.7 isan-jaton'ny fiakaran'ny vidin'ny solika, miaraka amin'ny fiakaran'ny 37.1 isan-jaton'ny vidin'ny fanondranana entona. Ny faritra ara-barotra maimaim-poana dia nahita fisondrotana 16.4 isan-jatony, izay nahatratra Dh97.46 lavitrisa (US $ 26.6 bn) tao 2008. Nandritra izany fotoana izany, tonga hatrany Dh 345.78 lavitrisa (US $ 94.2 bn) ny fanondranana entana; fiakaran'ny 33.4 isan-jato. Ny fitomboan'ny fangatahana an-trano noho ny fitomboan'ny isan'ny mponina sy ny fidiram-bolan'ny vola, miaraka amin'ny fitomboana tsara amin'ny varotra fanondranana indray, dia nanampy ny nanosika ny sandan'ny fanafarana 33.4 isan-jato hahatratra Dh735.70 lavitrisa (US $ 200.4 bn).
Ny fitrandrahana tamin'ny volana fahiraika ambin'ny folo voalohany tamin'ny 2009 dia nijanona tamin'ny 1.7 isan-jatony nidina tamin'ny taona lasa. Ny vidin'ny trano sy ny vidin-tsakafo ambany dia miteraka fanerena miharatsy ny toekarena. Ao amin'ny 2008, ny fisondrotan'ny vidin'ny 10.8 isan-jato, satria ny vola lehibe avy amin'ny vidin'ny solika avo dia nandrehitra ny fitomboana ara-toekarena, niteraka ny tsy fahampian'ny fananana sy ny serivisy. Mandritra izany fotoana izany, ny dolara amerikana malemy sy ny vidin'ny sakafo manerantany izay lafo dia lafo lafo kokoa. Ny pôlisin'ny Banky Foibe UAE dia ny fitazonana ny zana-bola ofisialy amin'ny ambaratonga ambany mba hamelomana indray ny fitomboana ara-toekarena.
Indostria sy fanodinana
Ny sehatra tsy hidradradradrana dia manana 63 isan-jaton'ny GDP amin'ny 2008, na dia eo aza ny vidin'ny solika sy ny entona, dia manome ny trangan'ny Dh 2.16 (US $ 590 bn) ho an'ny toekarena. Ny UAE dia manantena ny hampihena ny fandraisana anjara amin'ny sehatry ny hydrocarbons eo ho eo amin'ny 20 isan-jato ao anatin'ny folo manaraka ny 15 taona amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana fitomboana any an-toeran-kafa eo amin'ny toekarena. Ny famokarana sy ny indostria dia mitohy hatrany ho singa manan-danja amin'ny fanirian'ny Federasiona amin'ny fanovàna ara-toekarena, fananganana ireo sehatra efa mandrobona toy ny fanaovana solomaso aluminiana, seramika ary fanafody.
Ao amin'ny 2009, Abu Dhabi dia nanambara ny fahitana ny 2030 Economic Vision, nametraka sarintany lalana hanitsiana ny fampivoarana ara-toekarena lehibe kokoa. Mubadala Development Company, sandam-bola stratejika an'ny Governemanta Abu Dhabi, dia mizaka andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny indostria ao amin'ny faritra, ao anatin'izany ny tetikasa ao amin'ny aerostructure (singa an'habakabaka fiaramanidina fiaramanidina), famokarana, famatsiambola ara-barotra, angovo ary fialamboly. Mifantoka amin'ny loharanom-angovo azo havaozina ihany koa i Abu Dhabi ary ny orinasa ho an'ny angovo an'ny governemanta Masdar dia ampahany lehibe amin'ity paikady ity. Masdar City, izay ilay orinasa dia mamaritra ny ho 'tanàna voalohany tsy manam-pahefana-tsy mitrandraka eran-tany sy foiben'ny "International Renewable Energy Agency (IRENA)" farany, dia hipetraka ao amin'ny 40,000 sy ny orinasa 50,000 isan'andro miasa amin'ny orinasa maintso-herin'ny 1500. Masdar koa dia mamatsy vola be ny teknolojia haingam-pandeha mihena amin'ny alàlan'ny pirinty amin'ny masoandro manjavozavo, izay ahitana ny fananganana zavamaniry ao Abu Dhabi mahavita manamboatra takelaka ampy isan-taona mba hamokarana 130 megawatts
Dubai, na dia amboariny ny sasany amin'ireo orinasam-panjakàn'ny fanjakana tohanany aza, dia manohy manangana ny tanjany betsaka amin'ny indostrian'ny fizahantany, fizahantany ary varotra. Sharjah dia miroso amin'ny drafi-pampandrosoana ara-indostrialy, ary ny Ra's al-Khaimah Investment Authority (RAKIA) dia mikasa ny hamoaka foto-kevitra momba ny zoro ara-indostrian-dahy hamorona klumpeur amin'ny trano famokarana. Fujairah dia nametraka faritra malalaka virtoaly, voalohany ao amin'ny UAE, izay mamela ny orinasa any ivelany raharaham-barotra ho an'ny latsaky ny fiampangana azy. Ankoatr'izay, ny fitondrana UAE dia eo amin'ny dingana farany amin'ny fanomanana lalàna indostria izay antenaina ihany koa hampirisika ny fananganana indostria nasionaly.
Tetikasa lehibe maro no vita tao amin'ny 2009, iray amin'ireo mahavariana fa Yas nosy, trano fialan-tsasatra any Abu Dhabi ary fonenan'ny fizaran-tany Yas Marina, izay nampiantrano ny Formula One Grand Prix tamin'ny Novambra 2009. Ny teti-bolan'ny fotodrafitrasa lehibe izay vita, anisan'izany ny Dh28 miliara (US $ 7.62 bn) Dubai Metro, ny rafitra fitaterana tsy misy mpamily nidina ny fon'ireo emirates; Tetezana Sheikh Khalifa, mampifandray ny Nosy Abu Dhabi amin'ny Saadiyat sy ny Nosy Yas; ary ny Palm Jumeriah Monorail. Ny ambony indrindra avo indrindra eran'izao tontolo izao; ny Burj Khalifa any Dubai, misokatra mandritra ny herinandro voalohany 2010.
Ny fizahantany dia sehatra mitombo lehibe ho an'ny toekarena UAE manontolo. Samy nanao ny fanavaozana fanavaozana indray i Abu Dhabi sy i Dubai, mifantoka amin'ireo trano fandraisam-bahiny tena manara-penitra sy trano fandraisam-bahiny. Avy amin'ny toeran'ny nosy tropikaly Sir Bani Yas any andrefan'i Abu Dhabi, ny lalana miafina any Qasr al-Sarab, any amin'ny Liwa Oasis, ary i Al Maha sy Bab al-Shams any Dubai mankany amin'ny morontsiraka amoron-tsiraka misy any Fujairah, Ra's al Khaimah sy Ajman, ny UAE dia manolotra fotodrafitra mahafinaritra any amin'ny toerana lavitra sy tsara tarehy. Ny tetik'asa faneva toa an'i Emirates Palace Hotel, Burj al-Arab, Madinat Jumeirah, ary ny Bruj Khalifa dia nanampy tamin'ny fampiakarana ny mombamomba ny firenena, ka ny vokatra dia betsaka ny tolotra omen'ny Federasiona na dia ny fangatahan'ny vahiny aza. Maherin'ny 11.2 tapitrisa mpitsidika no andrasana amin'ny 2010, izay manohana ny fahombiazan'ny fikasana UAE hampiakatra ny fampiasam-bola amin'ny indostrian'ny vahiny.
Entim-barotra amin'ny asa fanaovana asa
Ao amin'ny 2009, ny UAE dia nihaika tamin'ny toerana efatra ambin'ny folo tao amin'ny tatitra 'Doing Business' novokarin'ny Banky Iraisam-pirenena sy ny Orinasa Iraisam-pirenena iraisam-pirenena. Ny tatitra momba ny sehatra iraisam-pirenena dia manombatombana ireo firenena fa mora ho an'ny orinasa madinika sy salantsalany ny mitantana orinasa. Ny Federasiona dia tafakatra hatramin'ny fahatelo-telopolo teo amin'ny laharana eran'izao tontolo izao ho an'ny fanavaozana ny fitsipi-pifehezana, ampahany noho ny fanapahan-kevitry ny governemanta hanafoanana ny fangatahana modal kely ambany indrindra Dh150,00 (US $ 40,871) ho an'ny orinasa vao manomboka.
Ny antony roa lehibe amin'ny fiakaran'ny UAE dia ny fanalefahana ny fizotran'ny dingana tafiditra amin'ny fahazoan-dàlana fananganana sy ny fanatsarana ny fahaiza-manao ao Dubai seranan-tsambo.
Ny fampiasam-bola amin'ny tsena any ivelany dia efa ela dia tafiditra ao amin'ny tetika stratejika an'ny UAE hamoronana tambajotra fiarovana ho an'ny taranaka ho avy, indrindra ireo izay miatrika ny fahatsinjovana ny tahirin-tsolika hidradradradrano. Anisan'ireo vondron-karena lehibe iraisam-pirenena any Emirates dia: ny Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi Investment Council, Invest AD, ny Investment Investment of Dubai, Dubai Holding, Dubai Holding Commercial Operations Group (anisan'izany ny Dubai Properties Group, Sama Dubai, Tatweer, Ary ny Duabi Holding Investment Group), sy ny World World. Ankoatr'izay, Mubadala, ny Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) ary ny International petroleum Manomboka ny fampandrosoana ny angovo any ivelany ny orinasa Investment (IPIC).
Dingana nataon'ny alàlan'ny andrim-panjakana federaly ao amin'ny 2008 hamerenana ny fahatokisan-tena amin'ny rafitra ara-bola, ao anatin'izany ny ivotoerana UAE Central Bank Dh50-miliara (US $ 13.6 bn) hanohanana ireo mpampindram-bola eo an-toerana, sy ny minisitry ny Vola UAE Dh70 lavitrisa (US $ 19 bn) Drafitra fanohanana, natao hanamboarana ny fampindramam-bola, ny tsenam-bola beoy ary hanomezana hery ny toe-karena. Ao amin'ny 2008, nanambara ihany koa ny Governemanta federaly fa mety hatramin'ny Dh120 miliara (US $ 32.7 bn) dia azon'ny banky manerana ny firenena eo ambanin'ny fandaharana fampindramam-bola maromaro, ary manome antoka ny tahiry sy ny fampindramam-bola interbank mandritra ny telo taona.
Tamin'ny volana Janoary 2009, ny departemantan'ny famatsiam-bola Abu Dhabi dia nanindrona Dh16 lavitrisa (US $ 4.35 bn) ho an'ny dimy amin'ireo banky lehibe indrindra an'ny emirate. Ireo fepetra ireo dia nanampy tamin'ny fanamafisana ireo takelaka mifandanja amin'ny banky, na dia nilatsaka aza ny fidiram-bolan'ny banky tamin'ny suku voalohany, ary ny komity ara-bola vonjy maika no napetraky ny ministeran'ny toekarena mba handinihana ireo hetsika fanampiny hanohanana ireo mpampindram-bola.
Nandritra ny taona, nitatitra ny fihenan'ny lesoka ny banky ary tsy nahaloa ny fandoavana ny trosan'ny varotra sy ny fanjifana. Vokatr'izany, ireo banky UAE voatanisa dia nandinika tamim-pitandremana tamin'ny alàlan'ny fitaterana ny fisolokiana avo lenta kokoa noho ny mahazatra. Mba hanampiana amin'ny famoronana vola amin'ny rafitra ara-bola, dia nanome toromarika an'ireo mpampindram-bola ny Banky Foibe fa avy amin'ny 2010 dia tsy maintsy manaraka ny lalànan'ny Basel II momba ny fitakiana vola amin'ny banky izy ireo ary mifantoka bebe kokoa amin'ny fifehezana sy ny fitantanana. Nampahafantarin'ny governemanta ihany koa ny tetika hanambatra ny mpamatsy vola roa lehibe indrindra an'ny Emirates, dia i Amlak sy Tamweel. Ity dia heverina ho manan-danja amin'ny fanarenana eo amin'ny tsenan'ny trano.
Ny famerenam-bola nindram-bola napetraky ny konglomerat avy amin'ny governemanta ihany koa dia zava-dehibe tamin'ny hetsika tao amin'ny 2009. Tamin'ny volana febroary 2009, ny governemanta Dubai dia nivarotra Dh36.7 lavitrisa (US $ 10 bn) natorana ny Banky Foibe hanampy ireo orinasa ao amin'ny fifehezana azy handoa ny trosan'ny trosa ary handoa ny mpiantoka. Mba hiaraha-maso ny fizarana ireo vola ireo, dia natsangana tamin'ny volana Jolay 2009 ny vola fanampiana Iraisam-pirenena Dubai. Tamin'ny 25 Novambra 2009, nanambara ny Governemanta Dubai fa namatsy Dh18.4 tapitrisa (US $ 5 bn) ny famatsiam-bola avy amin'ny National Bank Abu Dhabi sy Al Hilal Bank, izay samy mifehy ny iray amin'ireo vola harena lehibe indrindra ao Abu Dhabi. ny filankevitra fampiasam-bola Abu Dhabi. Nahomby ihany koa i Dubai nahavita trosa marobe tao 2009, anisan'izany ny famatsiam-bola Dh12.47 lavitrisa (US $ 3.4 bn) ny fandoavan-ketra ny mpampindram-bola Borse Dubai tamin'ny volana febroary, ary ny fandoavan-trosa Dh3.67 lavitrisa (US $ 1 bn) Dubai Civil Aviation Authority Fatorana silamo tamin'ny Novambra.
Ny tahiry voatanisa ao amin'ny tsena ara-bola ao Dubai dia namarana ny taona hatramin'ny 10.2 isan-jato, saingy mbola mihoatra ny 70 isan-jatony no nihena tamin'ny taona ambony. Ny stock amin'ny Abu Dhabi Securit Exchange dia nisondrotra 14.7 isan-jato ao amin'ny 2009, saingy mbola nidina 46 isan-jato avy amin'ny avo lenta 2008.
Menaka sy entona
Miaraka amin'ny ampahany betsaka amin'ny tany sasany amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy, ny UAE kosa dia ny masoivoho efatra no lehibe indrindra any amin'ny faritra, aorian'ny fihenan-dàlana. Arabia Saodita, Iran sy Irak.
Ny UAE dia manana tahiry fahenina lehibe indrindra eran'izao tontolo izao azo antoka amin'ny alàlan'ny menaka masiaka, ary ny tahirin-javaboary fahafito voaporofo fahafito indrindra. Na dia hany mpamokatra solika sivy be indrindra eran'izao tontolo izao aza, dia izy no mpanondrana solika lehibe fahadimy lehibe indrindra, miaraka amin'i Russia sy Saudi Arabia ihany no manondrana betsaka kokoa. Ny fanondrana entana masiaka dia manatona akaiky an'i Iran sy Koety, izay samy manana tahiry lehibe kokoa izy ireo.
Ao amin'ny 2009, noho ny fanarahana fakan-tahaka amin'ny fanapahana ny firaketana an-tsoratra natolotry ny Fikambanan'ny Firenena momba ny fanondranana petrolika (OPEC) mba hampandehanana ny tsenan-tsolika, ny famoahana solika an'ny UAE dia nianjera manodidina ny barika 2.3 tapitrisa isan'andro (bpd) avy amin'ny 2.9 tapitrisa ao amin'ny 2008. Ny famokarana entona dia mijoro amin'ny 7 miliara metatra toradroa isan'andro. Ny UAE dia misisika mialoha miaraka amin'ny tetika hanitarana ny fahaiza-manao famokarana solika sy ny entona, saingy dia nanitatra ny fotoana hamolavolana solika izany nefa omena ho laharam-pahamehana kokoa amin'ny tetik'ady entona.
Tany am-piandohan'ny 2009 ny tobin-tsolika voaporofo an'ny Federasiona dia nijoro tamin'ny 227.1 trillion cubic tongotra - ampy rano ho an'ny famatsiana mihoatra ny 130 tamin'ny vidin'ny famokarana vao haingana. Anisan'izany, ny tsy fahampian'ny entona Emirates dia tsy noho ny tsy fahampian'ny tahirin-tsolika, fa amin'ny tsy fivoarana, na dia maro aza ny tahirin-tsolika dia karazana iray lafo vidy sy sarotra novokarina. Abu Dhabi dia zava-dehibe amin'ny fanamafisana ny fahaizan'ny famokarana solika sy ny entona any UAE, satria misy manodidina ny 94 isan-jaton'ny tahirim-bolan'ny Federaly ary mihoatra ny 90 isan-jaton'ny tahiriny entona. Mihamitombo ny fahaiza-manao eo amin'ny famokarana solika sy ny entona.
Mandritra izany fotoana izany, ny famokarana solika any Dubai, izay indray mandeha teo ho eo amin'ny antsasaky ny harinkaretina GDP dia nirodana tanteraka avy amin'ny tampon'ny 1991 tampony 410,000 bpd; nataon'i 2007 dia nidina t @ 80,000 bpd. Raha manohy manondraka entona avy any an-tsaha any ivelany izy, dia mandany solika bebe kokoa noho ny vokariny ny Dubai, ary miankina amin'ny fanafarana ihany koa izy io. Ny emirate dia efa nividy tongotra an-jatony tapitrisa isaky ny entona avy amin'ny Dolphin Energy, orinasa Abu Dhabi izay manafatra entona avy ao Qatar.
Ny efatra amin'ireo emirà dimy ambiny ao UAE dia manana famokarana menaka sy entona madinidinika; Tsy namokatra solika na entona i Fujairah, na dia misy fandaharam-pandraharahana any ivelany aza efa eo am-panaovana izany. Na izany aza, ny seranan-tsambo bunkering faharoa lehibe indrindra eran-tany dia hita ao amin'ny morontsirany. Ny seranan'i Fujairah, eo amoron'ny Ranomasina Arabo, dia mitentina 1 tapitrisa taonina isam-bolana eo amin'ny fitrandrahana solika fitaterana an-dranomasina sy vokatra hafa solika. Ny fahatongavan'ny gazy 2008 amin'ny alàlan'ny fantsom-pamokarana Dolphin Energy avy ao Qatar dia nanamora ny fivoarana ny rano sy ny rano amin'ny emirate ary nandrisika ny indostria eo an-toerana.
IPIC, fananan'ny Governemanta Abu Dhabi dia manangana fantsona stratejika-solika stratejika mba hanaterana ny 150,000 bpd solika avy amin'ny sahan'i Abu Dhabi izay any amin'ny faritany miantsoroka Abu Dhabi izay misy terminal vaovao fanondranana any Fujairah. Mikendry ny hanomezana lalana lalan-tsofina ho an'ny krust an'habakabaka an'i Abu Dhabi amin'ny alàlan'ny teboka tsokona an-dranomasina ao amin'ny Strait of Hormuz. Vinavinaina ho vita amin'ny 2010 izy io, miaraka amin'ny fandefasana entana voalohany avy any Fujairah andrasana amin'ny 2011 tany am-piandohana. Namorona trano fanamboarana solika sy fitahirizana solika ao amin'ny seranan'i Fujairah ihany koa ny IPIC.
Miaraka amin'ny saika 10 isan-jaton'ny fitahirizan'izao tontolo izao feno tahirin-tsolika voaporofo ary fitahirizana entona voajanahary lehibe indrindra lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ny UAE dia mpiara-miantoka sy mpamatsy andraikitra amin'ny tsenan'ny angovo eran-tany. Raha ny zotram-piainana amin'ny lafiny toekarena dia ny 30 isan-jaton'ny isan-jaton'ny vokatra an-trano ihany no manondrana ny solika ankehitriny, vokatry ny politikan'ny governemanta mahery setra natao hanatsarana ny toe-karena any UAE.
Ny UAE dia manohy ny fandaharan'asa havaozina sy angovo azo havaozina. Ao amin'ny 2005 ny UAE dia nanankato ny Kyoto Protocol ho an'ny fivorian'ny Firenena Mikambana momba ny fiovan'ny toetr'andro, lasa iray amin'ireo firenena mpamokatra solika lehibe voalohany nanao izany. Abu Dhabi koa dia nametraka ny iray amin'ireo tetik'asa havaozina sy fanavaozana feno indrindra manerantany.
Solika sy menaka voajanahary
Ny Emirate tsirairay dia mifehy ny famokarana solika sy ny fampandrosoana ny loharanon-karena. I Abu Dhabi dia mitazona mihoatra ny 90 isan-jaton'ny volan'ny solika any UAE, na barika 92.2 lavitrisa. Dubai dia misy barila 4 miliara tombanana, arahin'i Sharjah sy Ras al-Khaimah miaraka amina 1.5 miliara ary famaritana menaka 100 tapitrisa.
I Abu Dhabi dia manana tantaram-baovao amin'ny fandraisana an-tanana ny fampiasam-bola tsy miankina amin'ny sehatry ny fitrandrahana solika sy famokarana entona. Eny tokoa, i Abu Dhabi no hany mpikambana tsy miankina tamin'ny alalàn'ny fananana ireo mpampiasa vola vahiny nandritra ny onjam-pirenena nampivarahontsana ny indostrian'ny solika sy gazy eran-tany tamin'ny antenatenan'ny 1970, ary mbola mahazo tombony amin'ny sehatra ambony amin'ny fampiasam-bola tsy miankina. Ankehitriny, ireo orinasan-tsolika iraisam-pirenena avy any Etazonia, Japon, Frantsa, Grande-Bretagne ary ireo firenena hafa dia manohy mifikitra tsatoka iraisan'ny 40 sy 100 isan-jaton'ny fifanarahana menaka be dia be an'i Abu Dhabi.
Ny UAE dia manondrana ny 60 isan-jaton'ny menaka moto ao Japana, ka izy no mpanjifa lehibe indrindra any UAE. Saika mankany Japon avokoa ny fanondranana entona, mpamaky entona feno diloilo manerantany, miaraka amin'ny UAE izay mamatsy ny ampahafolon'ny fitakian'i Japana.
Noho ny zava-misy ara-jeografika misy fiantraikany amin'ny vidin'ny fitaterana, dia manondrana solika sy menaka mora foana ny UAE any Etazonia. Na izany aza, ny UAE dia mpamatsy solika lehibe sy mpamokatra enta-mavesatra ho an'ny tsena iraisam-pirenena ary faharoa ihany no mankany Arabia Saodita amin'ny lafiny fahaiza-manao famokarana solika. Ho fanampin'izany, ny drafitra mahery vaika ataon'ny UAE amin'ny fanitarana ny fahafaha-manao famokarana dia handray anjara betsaka amin'ny fanimbana ny ho avy, ny fisondrotan'ny fangatahana mitaky ny vidin'ny solika.
Tetikasa Dolphin, izay manafatra ny entona voajanahary amin'ny alàlan'ny fantsona avy any Qatar mankany UAE, no fifanatrehana herinaratra lehibe voalohany teo anelanelan'ireo firenena Telona. Hanafaka ny entona Abu Dhabi amin'ny famerenana sy ny fanondranana solika maivana ny tetikasa. Petrovitaly of the United States sy Total of France dia samy manana tsatoka ara-bola 24.5 isan-jato eo amin'ilay tetikasa, raha ny Governemanta Abu Dhabi kosa mihazona ny 51 sisa tavela. Ny fanafahana ara-barotra voalohany an'ny gazy voajanahary Qatari dia nanomboka tamin'ny fahavaratra tamin'ny 2007 ary hitohy mandritra ny vanim-potoana 30 fifanekena momba ny fampandrosoana sy ny fizarana famokarana nosoniavina tamin'ny Governemanta Qatar.
Ny fanaterana entana amin'ny menaka
Ao anatin'ny ezaka hanamafisana ny fiarovana ny famatsiana, ny fanjakana any amin'ny Golfa dia mandinika ny famolavolana fantson-tsolika izay mety hihoatra ny Strait of Hormuz. Eo amin'ny dimy ampahadimin'ny volan'ny varotra eran-tany izao no alefa tanker amin'ny alàlan'ity lalana 34 kilometatra ity.
Raha namboarina dia afaka mihetsika mihoatra ny 6.5 tapitrisa barre isan'andro ny fantson-tsolika isan'andro na manodidina ny 40 isan-jaton'ny salanitra izay alefa any amin'ny Strait amin'izao fotoana izao. Ny fananganana fantsona kely kely kokoa dia hitondra menaka avy any amin'ny sahan'ny menaka Habshan any UAE mankany amin'ny Emirate of Fujairah, izay eo ivelan'ny tsipika any amin'ny Helodranon'i Oman.
Mitombo ny famatsiana solika
Ny UAE dia manohy mihamitombo ny famokarana azy ho famatsiana ny tsenan'ny angovo manerantany. Na dia misy firenena OPEC sy firenena maro tsy OPEC aza dia nahita ny fihenan'ny famokarana tao anatin'ny dimy taona lasa, ny UAE dia nampitombo ny vokatra famokarana menaka marika manodidina ny 31 isan-jato. Tsy nisy herintaona tamin'io fotoana io ny famokarana isan-taona latsaka ambany noho ny tamin'ny taon-dasa.
Ny fihodinana any aoriana, ny orinasan-tsolika sy ny entona any amin'ny UAE dia manohy mamantatra tetikasa vaovao mikendry ny fampiroboroboana ny famokarana menaka madiodio ny firenena amin'ny barika 4 tapitrisa isan'andro isan'andro amin'ny 2020, izay mitombo fanampiny fanampiny manodidina ny 40 isan-jato noho ny ankehitriny ambaratonga famokarana.
Ny herinaratra: mitombo haingana ny filàna
Ny fivoarana ara-toekarena manerana ny UAE dia niteraka fitomboan'ny fangatahana herinaratra. Ny tombantombana ankehitriny dia manondro fa ny fangatahan'ny herinaratra an-trano dia mihoatra ny avo roa heny noho ny 2020. Miaraka amin'ny fetra ny habetsaky ny angovo nentin-drazana nentim-paharazana, toy ny entona voajanahary, azo entina eny an-tsena, ary koa ny ahiahy momba ny fiovan'ny toetr'andro, nanangana hetsika isan-karazany ny Governemanta UAE mba hamantarana ireo fomba hafa mahomby amin'ny famokarana herinaratra ilaina amin'ny angovo toe-karena.
Ny UAE dia manombatombana ny mety hamolavolana fandaharana angovo nokleary milamina. Ny Governemanta UAE dia mahatsapa tsara ny fahatsapana ananana momba ny fampielezana ireo reaktera niokleary ary na dia ny fanombanana tsotra fotsiny aza. Araka izany, ny Governemanta UAE dia nanao izay hanazavana ny tanjona milamina sy tsy misy dikany, raha jerena ny fandanjalanjana ny fandaharan'angovo nokleary milamina ary koa ny fiparitahan'ny ho avy. Ny governemanta dia namoaka taratasy lalindalina kokoa ho an'ny besinimaro, amin'ny fiatrehana ny fomba mety hivoarana ny mety hisian'ny angovo nokleary am-pilaminana, am-pilaminana ary am-pilaminana. Ho ampahany amin'ny fanoloran-tena ho an'ny fangaraharana, tsy famokarana, fiarovana ary fiarovana, ny UAE dia nanapa-kevitra fa tsy hanenjika ny fanambinana uranium fa hiantehitra amin'ny tsena iraisam-pirenena ho an'ny solika nokleary. Nandritra ny dingana dia niara-niasa akaiky tamin'ny International Atomic Energy Agency (IAEA) sy ny governemanta hafa ny UAE, anisan'izany i Etazonia.
Na eo aza ny andraikitry ny solika sy ny entona ho an'ny UAE, dia nanao fanekena ny tany tamin'ny angovo hafa ny firenena. Ny UAE dia manao dingana hampihenana ny famoahana entona karbônina amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra lehibe any Abu Dhabi sy Dubai.
Namolavola drafitra maoderina momba ny tontolo iainana i Dubai izay hiantoka ny fanatanterahana ny fitomboana sy ny fivoarana mandritra ny fiarovana ny tontolo. Mitaky anjara toerana ny fitantanana ny herinaratra, toy ny fitomboan'ny fitateram-bahoaka.
Ny Emirate lehibe indrindra ao UAE, Abu Dhabi, dia nahavita vola mihoatra ny $ 15 miliara amin'ny programa angovo azo havaozina. Ny Initiative Masdar dia manasongadina ny fanolorantena kambana ho an'ny tontolo manerantany sy ny fanitarana ny toekarena UAE. Ny Masdar Initiative dia mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny varotra ara-barotra amin'ny teknolojia amin'ny angovo azo havaozina, ny fahombiazan'ny angovo, ny fitantanana ny karbônika ary ny fanamafisana, ny fampiasana ny rano ary ny fanodinana.
Ny mpiara-miombon'antoka Initiative dia ahitana ny sasany amin'ireo orinasa angovo lehibe indrindra manerantany sy andrim-panjakana ambony indrindra: BP, Shell, Petrolitaly Occidental, Fitrandrahana sy famokarana, Electric Electric, Mitsubishi, Mitsui, Rolls Royce, Imperial College London, MIT ary WWF. Manana singa efatra lehibe izy: ivontoerana fanavaozana hanohanana ny fihetsiketsehana, fanaovana varotra ary ny fampiasana ireo teknolojia angovo maharitra. Masdar Institute of Science and Technology miaraka amin'ny programa misy diplaoma amin'ny angovo azo havaozina sy ny faharetana, hita ao an-tanànan'i Masdar, tanàna voalohany-karbonina, tsy misy fako ary tsy misy fiara. Orinasa fampandrosoana nifantoka tamin'ny fivarotana varotra ireo famafana, ary vahaolana vahaolana mekanika fanadiovana madio izay nomen'ny Kyoto Protocol. Faritra ara-toekarena manokana hampiantranoana ireo andrim-panjakana mampiasa ny teknolojia sy angovo azo havaozina.
Ny politikan'ny angovo an'ny UAE
Ny UAE dia efa ela mpamatsy angovo lehibe ary lasa mpanjifa angovo mifandraika amin'izany ihany koa. Amin'ny ezaka hataony mba hanafainganana ny tahirin-tsolika hidrokarolina fanampiny sy amin'ny ezaka hataony amin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana ireo loharanom-angovo azo antoka, ny fanantenana UAE dia hanohy ny fomban'izy ireo ela momba ny fitantanana ny angovo.
Ny fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny UAE dia iray amin'ireo asa sarotra nifandraisany hatrizay. Ny hafanana sy ny rotsakorana be loatra dia miteraka toe-piainana henjana, mitaky fanitsiana manokana ny biby sy ny zavamaniry mba ho velona. Na ny fiovan'ny toetr'andro kely aza dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny maha-biodiversity an'i UAE. Ankoatr'izay, ny morontsiraka ambany dia midika fa na ny fiakaran'ny kely amin'ny haavon'ny ranomasina aza dia misy fiantraikany lehibe amin'ny zoro amoron-tsiraka, izay misy ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny firenena ary misy ny asa fampandrosoana efa vita. Eny tokoa, ny fikarohana siantifika dia mahita famantarana fa mety hiakatra ny haavon'ny ranomasina ao amin'ny Golfa.
Ny mponina dia nitombo avy amin'ny manodidina ny 180,000 any 1968 ka manodidina ny dimy tapitrisa ankehitriny. Vokatr'izany dia nitombo be ny tany ampiasaina ho an'ny trano fonenana, fivarotana ary indostria. Reclamation sy ny fampandrosoana dia namerina ny UAE morontsiraka amin'ny fotoana fohy. Ny fanitarana ny fotodrafitrasa Federaly amin'ny endrika seranam-piaramanidina, seranan-tsambo ary làlam-be dia nitaky fihenam-bidy bebe kokoa momba ilay toeram-ponenana taloha, raha ny fananganana vato hanaovana fananganana dia nisy fiantraikany lehibe tamin'ny ankamaroan'ny Tendrombohitra Hajar.
Na eo aza ny dinamika fanovana, ny governemanta dia miantoka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary hahatratra ny fifandanjana maharitra eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny filàna fampandrosoana.
Ny minisitry ny tontolo iainana sy ny rano, miaraka amin'ireo masoivoho eo an-toerana - izay no tena mavitrika dia ny masoivoho tontolo iainana Abu Dhabi, tompon'andraikitra amin'ny efa ho efatra amby dimy-polo amin'ny faritry ny tanin'i UAE - dia nanohy niasa tamin'ny programa maoderina momba ny fikarohana siantifika sy ny fanomanana. ary fampiharana ny fitsipika sy torolalana mandrakizay.
Ny fanentanana fampianarana dia natao tamin'ny fanampian'ny fikambanana tsy miankina toy ny Emirates Wildlife Society (EWS) mba hanentanana am-pahibemaso ny tokony hiarovana ny tontolo ary hampihena ny fanjifana angovo sy rano.
Yasat Marine Protected Area, miaraka amin'ireo dugong tandidona tandindomin-doza dia narafitra mba ahitana amina nosy maro kokoa, ary ankehitriny amina faritra efa ho kilometatra toradroa 3000. EWS sy ny kaominina Fujairah koa dia nanambara ny fiarovana Wadi Wurrayah ho fiarovana. Trano ho an'ny tahr arabo tandindomin-doza, io no fiarovana ara-tendrombohitra voalohany an'ny UAE.
Ny fikajiana ny rano madio sy ny harena an-dranomasina dia avo ihany koa amin'ny fandaharam-potoanan'ny UAE, raha ny fandotoana ny rivotra kosa vokatry ny fananganana vato sy ny fanamboarana simenitra dia nahatonga ny fanakatonana ny fananganana sasany ao Ra-al-Khaimah sy Fujairah.
Ankoatr'izay, ny Federasiona dia niara-niasa nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny firenena hafa miorina amin'ny fifanarahana bilateral miaro ny karazana manokana, toy ny houbara bustard, izay mipoaka any Azia afovoany fa mifindra amin'ny Golfa Arabo. Ny UAE izao dia voafidy ho Foiben'ny birao vaovao amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fikajiana sy ny fiarovana ny karazam-borona mpifindra monina manerana ny tany Eoropa, Afrika sy Azia.
Media sy ny kolontsaina
Ny UAE no foibe ara-barotra an'ny sehatry ny haino aman-jery Afovoany Atsinanana, miasa ho vondrom-paritra ho an'ny orinasam-baovao iraisampirenena ary toy ny saha mahavokatra ho an'ny fampandrosoana ny indostrian'ny media an-trano. Ny sehatra mitombo haingam-pandeha dia karakarain'ny National Media Council, izay tompon'antoka amin'ny famoahana ny fahazoan-dàlana amin'ny haino aman-jery, ny fampiharana ny lalàna amin'ny haino aman-jery, ary ny fampandehanana ny departemantan'ny fampahalalam-baovao ivelany sy ny Emirates News Agency, WAM.
Iray amin'ny konglomerates media lehibe indrindra eto amin'ny firenena dia ny Abu Dhabi Media Company, izay manana sy mitantana fantsona fahitalavitra, tambajotra onjam-peo, misy boky maromaro (Gazety Al Ittihad, Gazety Nasionaly, gazety Zahrat Al Khaleej ary magazine Majid ) ary orinasa maromaro mifandraika amin'ny haino aman-jery maro, ao anatin'izany ny orinasa mpamorona sarimihetsika Imagenation, United Printing Press ary Live.
Ny zoro maimaim-poana dia fitaovana tamin'ny fivoaran'ny media, nanangana vaovaom-baovao ao amin'ny sehatry ny haino aman-jery twofour54 vaovao Abu Dhabi izay nahasarika ny matihanina haino aman-jery maro hafa. Dubai Media City izao dia manana orinasa misoratra anarana 1200 misimisy kokoa toy ny CNN, ny BBC, MBC ary CNBC. Ity dia iray amin'ireo zana-tserasera tsy miankina amina haino aman-jery tantanan'i Tecom, ao anatin'izany ny Dubai Internet City, Dubai Studio City ary ny International Media Production Zone. Ireo zona ireo dia nopetahana tamin'ny fampivoarana ireo zotra malalaka fampahalalam-baovao kely toa an'i Fujairah Creative City sy ny RAK Media City.
Ny famokarana horonantsary, na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na eto an-toerana, dia ampaherezina, ary tohanan'ny fikambanana marobe, anisan'izany ny Dubai Studio City, twofour54, ny Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage (ADACH), ny Circle ary ny Abu Dhabi Film Commission.
Boky, anisan'izany ny fandikana ny asa lehibe amin'ny teny arabo, ary natolotry ny fikambanana toa ny Kitab sy Kalima. Drafitra lehibe ho an'ny mpamoaka boky natao tany UAE dia misy ny toeram-pivarotana iraisam-pirenena Sharjah efa hatry ny ela sy ny Abu Dhabi International Book Fair, fa ny loka literatiora lehibe indrindra dia ny Sheikh Zayed Book Award, izay nandeha tany amin'i Pedro Martinez Montavez tao 2009.
Ny Dubai Press Club dia mikarakara, ankoatra ny zavatra hafa, ny Arab Media Forum, ary mandray anjara amin'ny Arab Journalism Awards, amin'izao taona fahavalo izao ary misy sokajy roa ambin'ny folo.
Ny lova sy ny kolontsaina dia ivon'ny maha-firenena, ary ny UAE dia manandrana ezaka hitahiry ny kolontsain'izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny Federasiana dia mandalo fahitana ara-kolontsaina, misy ny fanamafisana manokana ny fampiasam-bola amin'ny loharanon-karena eran'izao tontolo izao sy ny fanadinoana ireo tetezana eo anelanelan'i Atsinanana sy Andrefana.
Ny minisiteran'ny kolontsaina federaly, ny tanora ary ny fampandrosoana ny fiaraha-monina dia mavitrika amin'ireto sehatra ireto, mamorona fotoana ho an'ny tanora Emirates handray anjara amin'ny hetsika ara-kolontsaina, ara-tsaina, fanatanjahantena ary fialamboly, ary koa mandrisika ireo olom-pirenena zokiolona handray anjara amin'ny maha-mpitaiza, mizara ny fahalalana ara-kolontsainy amin'ny taranaka tanora.
Mba hanampiana ny fifankatiavan'ny mozika dia mikarakara hetsika ara-mozika maro ny ADACH, ao anatin'izany ny Abu Dhabi Classics, izay nampiantrano ny lanonam-panavaozana ny New York Philharmonic any 2009. Natao tany Abu Dhabi ihany koa ny fetin'ny mozika eran'izao tontolo izao. Ankoatr'izay, andian-tsarimihetsika antsoina hoe 'Dubia Sound City' dia nisy fiatraikany lehibe tao 2009. Raha jerena ny zava-kanto ara-javakanto, tany am-piandohan'ny 2009 ny fampirantiana 'Emirati Expression' dia nahitana mpanakanto valo ambin'ny folo ao an-toerana, avy amin'ny mpandoko vazaha ka hatramin'ny taranja mpaka sary, mpamorona sary mihetsika, mpanakanto video ary fametrahana. Mandritra izany fotoana izany, ny Sharjah Biennial, Art Dubai, Art Fair ary fampirantiana maro hafa dia natao tamin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa toy ny Guggenheim Foundation, Louvre, New York University Abu Dhabi, ary Paris-Sorbone University Abu Dhabi. Ny zavakanto ankehitriny dia aseho tsara amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny arabato nanerana ny Emirates.
Anisan'ny hetsika lehibe ara-kolontsaina iraisam-pirenena nataon'ny Minisiteran'ny Kolontsaina, Tanora ary Fampandrosoana ny Vondrom-piarahamonina nandritra ny taona ny fikambanan'ny tranomboky voalohany an'ny UAE tao amin'ny Venice Biennale. Ny hetsika hafa any ampitan-dranomasina dia nahitana ny fetibe «UAE Cultural Day» nandritra ny herinandro tao Berlin sy ny fampirantiana zava-kanto Emirati-Alemanina tao Huamburg, izay nisy ny hetsika hafa an'ny Ministera, ny tetikasa "Dialogue of Cultures".
Eo amin'ny lafiny kolontsaina malalaka kokoa, ny tranombakoka kilasy eran-tany toa ny Guggenheim Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, ary ny Tranombakim-pirenena Sheikh Zayed. Mandritra izany fotoana izany, ny departemantan'i Sharjah Museum efa naorina tsara dia manara-maso ny tranom-bakoka sy ny andrim-panjakanana ara-kolontsaina, ao anatin'izany ny tranombakoka vaovao israeliana vaovao.
Ny olona sy ny fiaraha-monina
Faniriana hanatsara ny fenitry ny velona ny olony sy ny fiarahamonina ankapobeny dia nanosika ny politikam-panjakana maro - tsy eo amin'ny lafiny fampandrosoana ara-toekarena ihany fa eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monina. Tao anatin'ny taona vitsivitsy vitsivitsy dia nisy fiovana lehibe nitranga tao amin'ny fiaraha-monina iray taloha; zava-bita mahavariana io, na dia eo aza ny fikorontanana be dia be, ny UAE dia toeram-piarovana azo antoka sy tsy miova, misokatra sy mandroso, nalaza noho ny fandeferany, ny maha-olombelona ary ny fangorahana.
Ny ezaka ataon'ny governemanta hanampiana ny fiarahamonina amin'ny fizotran'ny fanovana dia nohamafisin'ny politika iray, naorina tao amin'ny 2009, fa ny toriteny amin'ny vavaka zoma manerana ny moske federaly dia tokony hifantoka amin'ny anjara asa sosialy sy fanabeazana momba ny fivavahana fa tsy amin'ny dogma ara-pinoana fotsiny. Ny lohahevitra dia ny fomba hitaizana zaza, ny zon'ny vehivavy sy ny maha-zava-dehibe ny asa, ny fivezivezena ao amin'ny firenena sy ny fandeferana.
Nandaitra ny politikam-piarahamonina ara-tsosialy, araka ny porofo amin'ny filokana ao amin'ny UN Development Development Index (HDI), izay mijery mihoatra ny GDP ho an'ny famaritana lehibe kokoa ny mahasoa. Teo anelanelan'ny 1980 sy 2007, ny UAE HDI dia tafakatra 0.72 isan-jato isan-taona, ary ankehitriny 0.903, avy amin'ny 0.743. Izany dia mametraka ny Federasiona faha-telopolo telopolo amin'ny firenena 182 izay misy ny angon-droa - maka toerana ho an'ny UAE ao amin'ny lisitry ny firenena manana isa ambony amin'ny fampandrosoana olona.
Na izany aza, ny fitomboan'ny mponina haingana dia haingana ny fanamby. Tamin'ny faran'ny 2009, ny mponina ao UAE dia tombanana ho 50.6 tapitrisa, tafakatra avy amin'ny 4.76 tapitrisa ao amin'ny 2008, na fitomboana isan-taona manodidina ny 6.3 isan-jato; ny tahan'ny fitomboan'ny mponina ao an-toerana dia tombanana amin'ny 3.4 isan-jato amin'ny 2009. Na eo aza izany fitomboana haingana izany, ny UAE dia mitazona ny toerany ho iray amin'ireo firenena manankarena indrindra amin'ny resaka GDP per capita, izay tombanana amin'ny Dh195,000 (US $ 53,133.5) tamin'ny fanombohan'ny 2009; faharoa ihany dia mankany Qatar ao amin'ny tontolo arabo.
Ny fianakaviana dia efa nanjary vato fehizoron'ny fiaraha-monina UAE. Ankehitriny, ireo olana ara-tsosialy sy toekarena dia mety mahasarotra na dia ny tena ankasitrahan'ny fianakaviany aza, ary ny governemanta dia manolotra fanampiana ho an'ireo sahirana, indrindra ireo zokiolona, ​​kilemaina ary fisaraham-panambadiana. Ankoatr'izay, ireo fikambanam-piaraha-miasa sy fiantrana tsy miankina amin'ny governemanta dia tafiditra ao anatin'ny programa momba ny fiahiana ara-tsosialy. Ny UAE Red Crescent Authority, amin'ny Partikular, no fikambanana mpanao asa soa lehibe indrindra eto amin'ny firenena, mitantana fandaharana sosialy, toekarena, fahasalamana ary fampianarana. Ny fanampiana azo ampiharina dia atolotry ny foibe ara-tsosialy tantanan'ny Union General Union.
Ny governemanta dia omena laharam-pahamehana ny filàn'ny trano eo an-toerana ary mikasa ny hanangana vondron'olona manana trano ilaina. Saika ny trano vaovaon'ny 17,000 vaovao ho an'i Emiratis dia haorina ao Abu Dhabi ao anatin'ny dimy taona ho avy, ary ny 50,000 dia roa amby roapolo manaraka. Ny ankamaroan'ny trano sy ny plots dia homena ny olom-pirenena ho karamaina. Ny Programme Sheikh Zayed Famatsiam-bola, vatsian'ny governemanta hanome karama sy trosa ho an'ireo olom-pirenena UAE, dia manohy manitatra ny asany manerana ny Emirates ihany koa.
Ny UAE dia manaja ny fahamarinan'ny olona tsirairay monina ao amin'ny Federasiona. Ny fanoloran-tena hiantoka ny fitoviana sy ny fahamarinana ara-tsosialy ho an'ny olom-pirenena rehetra dia voasoratra ao amin'ny Lalàmpanorenana. Ny lalàmpanorenana ihany koa dia mamaritra ny fahalalahana sy zon'ny olompirenena rehetra, mandrara ny fampijaliana, fisamborana sy fisamborana ary ny fanajana ny fahalalahana sivily, anisan'izany ny fahalalahana miteny ary an-gazety, milamina
fivorian'ny fiangonana sy ny fikambanana Ny governemanta dia tapa-kevitra ny hampiroborobo ny fampiroboroboana, amin'ny fomba manorina, ny fitsipiky ny Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ary tapa-kevitra ny hanatsara ny firaketana an-trano amin'ny alàlan'ny fampitana ny lalàna sy ny fanaony hatramin'ny daty. Mifanaraka amin'ny lova ara-kolontsainan'ny UAE sy ny soatoavina ara-pinoana, izay manome rariny, mitovy ary fandeferana.
Amin'ny ambaratonga iraisam-pirenena, ny federasiona dia sonia amin'ny Fifanarahana momba ny fanafoanana ny fanavakavahana amin'ny vehivavy, ny fifanarahana momba ny zon'ny zaza, ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa momba ny zokiolona, ​​ary ny fifanarahana momba ny zon'ny olona manana fahasembanana.
Amin'ny ambaratonga nasionaly, ny federasiona dia sonian'ny fifanarahana momba ny fanafoanana ny fanavakavahana amin'ny vehivavy, ny fifanarahana momba ny zon'ny zaza, ny fifanarahana momba ny zon'ny ankizy, ny fifanarahana momba ny zon'ny olona manana fahasembanana.
Amin'ny ambaratonga nasionaly, ny paikadim-panjakana dia mifantoka amin'ny fiantohana ny fampandrosoana maharitra sy ny hetsika mba hampiroborobo ny fanamafisana ny vehivavy sy ny fampandrosoana ny rafi-panabeazana sy fanabeazana manara-penitra, ary koa ny asan'ny fiaraha-monina izay manana filàna manokana sy vondron'olona marefo hafa. dingan-pandrosoana.
Raha ny resaka momba ny asa dia mikendry ny hitantana sy hitantana ny tontolon'ny asa mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena sy ny fomba fiasa iraisam-pirenena tsara indrindra ny UAE. Ezaka be dia be natao mba hiantohana ny fiarovana ny mpiasa, hiantohana ny fandoavana ny karama ara-potoana ary hanatsarana ny fiainana sy ny asa miasa, ary koa hiantoka ny fampiharana hentitra ny lalàna mba hanalefaka ny fanitsakitsahana.
Ny fitovian-jo dia teo amin'ny fandaharan'asan'ny governemanta hatramin'ny niorenan'ny Federasiona, ary ny vehivavy ao amin'ny UAE dia efa nekena hatrizay fa ny mpiara-miombon'antoka mitovy amin'ny fampandrosoana dia nasionaly. Ny governemanta dia manohy ny paikady hanamafisana ny vehivavy amin'ny sehatry ny kolontsaina, sosialy ary toekarena. Vokatr'izany, ny UAE dia eo amin'ny toerana faha-telopolo ao amin'ny 2009 UN Development Development Report Index momba ny Gender-Development - sary iray izay mametraka izany amin'ireo firenena manana toerana ambony indrindra.
Ny vehivavy UAE ankehitriny dia mandray anjara amin'ny andrim-panjakana rehetra eo amin'ny fitondram-panjakana, ao anatin'izany ny sampana mpanatanteraka, mpanao lalàna sy mpitsara ary mankafy karazam-asa fikarakarana isan-karazany. Raha ny marina, ny vehivavy UAE ankehitriny dia 66 isan-jaton'ny mpiasa avy amin'ny sehatry ny daholobe, 30 isan-jatony no ao amin'ny toerana ambony.
Ny olom-pirenena rehetra ao UAE dia mankafy ny fidirana amin'ny laoniny malalaka amin'ny fampianarana ambaratonga voalohany, faharoa sy avo lenta. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny sehatry ny fanabeazana dia nanisy lanjany vaovao: ny fanavaozana sy fanatsarana dia mampiseho dingana lehibe amin'ny tanjon'ny fampandrosoana an'ny Federaly, ary misy ezaka lehibe manerana ny birao handinihana ny curricula ary hiantohana ny fanombanana ny sekoly sy ny oniversite. ary nekena.
Ny fanabeazana manokana dia mihaino vaovao, izay mifantoka amin'ny 2009 momba ny fampidirana ireo mpianatra nasionaly avy amin'ny ivotoerana manokana ilaina amin'ny sekolim-panjakana mahazatra. Fitsipi-pitondran-tena vaovao ho an'ny sekolim-panjakana sy tsy miankina dia mikendry ny hiatrehana ny fitsipi-pifehezana ny sekoly, ary ny sazy dia hatao amin'ny tsy fanekena zaza manana filàna manokana.
Ny fanabeazana ambaratonga ambaratonga faharoa ao UAE dia mandalo fitomboana haingana sy fanovana. Misy oniversite Zayed University vaovao aorina eo amin'ny velaran-tany 75 any amin'ny Distrika renivohitra misongadina. Ny oniversite UAE ao Al Ain dia manana drafitra fivoarana lehibe ihany koa, ary misy toeram-pianarana vaovao iray eo an-dalam-pitorina. Ny andrim-panjakana manana ambaratonga fahatelo hafa dia ny Higle Colleges of Technology, ny foibem-piofanana Etihad, ny Emirates Aviation College for Aerospace sy ny Academic Studies, ny Emirates Institute for Banking and Finance, ary ny oniversite sy ny oniversite Etisalat.
Ireo oniversite vahiny, avy any Paris Sorbonne ka mankany amin'ny Michigan State University, dia misolo tena tsara ao amin'ny UAE. Misokatra amin'ny fararano 2010 ny campus campus Abu Dhabi ao amin'ny Oniversite New York. Ireo andrim-panjakana manan-danja hafa izay manolotra fampianarana marobe manokana dia ahitana ny INSEAD, ny New York Film Academy, The Dubai School of Government, The Petroleum Institute, ary ny Masdar Institute of Science and Technology.
Ny fiantohana ara-pahasalamana any UAE dia iraisan'ny besinimaro ary ny fikarakarana mialoha sy aorian'ny taty aorian'ny fotoana dia mifanaraka amin'ny firenena mandroso indrindra. Vokatr'izany dia nahatratra ny ambaratonga mitovy amin'ny an'ny any Eropa sy Amerika Avaratra ny fanantenana ny fahaterahana rehefa teraka 78.5 taona.
Ny fampidirana fiantohana ara-pahasalamana tsy manam-petra any Abu Dhabi ho an'ireo mpifindra monina ary ny fianakavian'izy ireo dia mpamily lehibe amin'ny fanavaozana ny politikam-pitsaboana. Ankoatr'izay, ny tetik'asa federaly dia mikendry ny hiantoka fa ny Emirati sy ireo mpila ravinahitra eto amin'ny firenena dia ho voararan'ny fiantohana ara-pahasalamana tsy maintsy aorina eo ambanin'ny tetika tsy maintsy ilaina.
Ny tobim-pahasalamana dia efa misy fenitra avo lenta any UAE, ary, na eo aza ny toetrandro ara-bola, ny fikarakarana ara-pahasalamana dia mijanona ho ivon'ny fampiasam-bola, miaraka amin'ny tetik'asa sasantsasany an'ny fanjakana sy tsy miankina amin'ny 2009.
Ny fitsaboana fanafody sy ny fahasalamam-bahoaka dia heverina ho mitsikera amin'ny fahasalamana maharitra amin'ny vahoaka tratry ny tanora any UAE. Miakatra ny aretina maro amin'ny fiainana amin'ny taona ho avy. Na dia mihalevona miadana aza ny sakana ara-kolontsaina dia miantraika amin'ny olana goavana toy ny homamiadana ihany koa izy ireo. Ny mammograma tsy maintsy ataon'ireo vehivavy eo anelanelan'ny dimampolo sy enimpolo ary fandrarana ny fifohana sigara federaly any amin'ny toerana be olona dia ohatra amin'ny ezaka atao amin'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka amin'izany. Ny UAE koa dia manana tahan'ny diabeta sy aretim-po, ary mihodina ny paikady hiatrehana ireo olana ireo. Ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny laharana dia fitaovana iray tena ilaina amin'ny politikam-pahasalamam-bahoaka, ary ny fanalefahana ny UAE dia miasa mafy hanatsarana.
Ny manampahefana momba ny fahasalamam-bahoaka ao 2009 dia notanterahina tamin'ny fandrahonana amin'ny aretin'ny kisoa (H1N1). Na izany aza, ny vatan-jaza telo lehibe - ny minisiteran'ny fahasalamana, ny manampahefana ara-pahasalamana - Abu Dhabi sy ny manam-pahefana ara-pahasalamana any Dubai - dia nivadika haingana sy mahomby amin'ny fisorohana ny fitsaboana, ny fitantanana ny krizy ary ny fanaraha-maso ny aretina ary ny drafitra mahomby dia napetraka hametrahana ny raharaha. .
Ny UAE dia manana serivisy fahasalamana feno sy novatsian'ny governemanta ary sehatra sehatry ny fahasalamana tsy miankina izay manome fenitra ara-pahasalamana ambony amin'ny mponina. Any amin'ny faritra maro any UAE, ny fiantohana ara-pahasalamana dia mandalo fiovana lehibe.
Ny ankamaroan'ny aretina voan'ny areti-mifindra toa ny tazomoka, ny fivontosana ary ny poliomyelitis izay efa voan'ny dememisy tany UAE dia voafafa, fa ny fikarakarana talohan'ny nahaterahana sy ny aorian'ny natokana dia mifanandrify amin'ny firenena mandroso indrindra: ny zaza vao teraka (neonate) vao teraka. dia nihena ho 5.54 isaky ny 1000 sy ny fahafatesan'ny zazakely amin'ny 7.7 isaky ny 1000. Ny tahan'ny fahafatesan'ny reny dia nidina tamin'ny 0.01 isaky ny 100,000.
Vokatr'io fitsipi-pitandremana avo lenta io amin'ny sehatra rehetra amin'ny rafi-pitsaboana, dia nahatratra ambaratonga mitovy amin'ny any Eoropa sy Amerika Avaratra ny fahatsinjovana ny fiainana rehefa teraka tao UAE, tamin'ny taona 78.3. Hatramin'izao, ny fikarakarana ara-pahasalamana any UAE dia novatsian'ny governemanta, amin'ny ankapobeny. Tahaka ny sehatra hafa dia mivoatra izany fanamafisana izany ary miha manan-danja kokoa ny fiaraha-miombon'antoka ho an'ny daholobe-bahoaka.
Ny politikam-bahoaka dia mifantoka amin'ny famolavolana rafi-pandaminana sy ara-dalàna mifototra amin'ny fampiharana tsara indrindra, hampiakarana ny fahaiza-manao momba ny fahasalamana amin'ny sehatra tsy miankina sy ny vahoaka. Ankoatr'izay, ny hetsika politika momba ny daholobe dia hametraka laharam-pahamehana ho an'ny fampandrosoana ny serivisy eo amin'ny sehatra.
Fiovan'ny fitsaboana any Abu Dhabi
Ny fandefasana fikarakarana ara-pahasalamana ao Abu Dhabi dia mandalo tetezamita manan-danja izay misy fiantraikany amin'ny tontolon'ny mpandray anjara: marary (olom-pirenena sy varotra mpila ravina), mpamatsy ary ireo tompon'andraikitra amin'ny drafitra, miantoka ny kalitaon'ny serivisy sy famatsiam-bola amin'ny rafi-pitsaboana. Tanjona lehibe ho an'ny manam-pahefana ara-pahasalamana any Abu Dhabi ny:
Manatsara ny kalitao fikarakarana, ny fiheverana voalohany indrindra, ny fampiroboroboana amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fenitra serivisy serivisy sy ny tariby fampiasa amin'ny rehetra.
Manitatra ny fidirana amin'ny serivisy, manome ho an'ny mponina rehetra ny fidirana amin'ny fenitra fikarakarana mitovy amin'ny herin'ny fisafidianana ny serivisy fikarakarana ara-pahasalamana, ka manentana ny fahombiazana amin'ny alàlan'ny fifaninanana malalaka-tsena.
Mifindra avy am-pahibemaso ho an'ny mpamatsy tsy miankina amin'ny laoniny sy am-pahombiazana ka ny mpamatsy tsy miankina, fa tsy ny fanjakana, ny serivisy fikarakarana ara-pahasalamana, miaraka amin'ny andraikitry ny governemanta amin'ny famolavolana sy fampiharana ny fitsipi-pahasalamana vaovao manerantany.
Manatanteraka modely famatsiam-bola vaovao amin'ny alàlan'ny rafitra vaovao amin'ny fiantohana ara-pahasalamana tsy maintsy atao.
Fiantohana takiana ho an'ny mpiasa rehetra, anisan'izany ny ao an-trano, dia vatsian'ny sponsors. Ny drafitra fiantohana ara-pahasalamana tsy manam-paharoa ho an'ny mpiasa tsy miankina, toy ny nampiharina tany Abu Dhabi, dia hihatra manerana ny firenena ao amin'ny 2008. Ny mari-pamokarana ny rafitra vaovao dia misy dingana mazava sy mangarahara famerenana, fidirana azo alain-tahaka ho an'ny mponina rehetra ary famatsiam-bola azo antoka ho an'ny fikarakarana ara-pahasalamana kalitao ao Abu Dhabi.
Ny tahirim-bola fiantrana dia hanohy hivezivezy amin'ireo tra-boina mandoa vola ary mandrakotra ny toe-pahasalamana mahery vaika toy ny homamiadana, dialysis, polytrauma ary fahasembanana.
Misy rafitra vaovao fiantohana ara-pahasalamana vaovao any Dubai ho an'ny olom-pirenena sy ny tsy an-tanindrazana ary nokasaina ihany koa fa hirodana any amin'ny firenena ny tetika farany.
Ny United Arab Emirates dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany sy fivezivezena haingana indrindra manerantany. Ny fahaizan'ny Arabo nentim-paharazana sy ny mari-pana mafana amin'ny ririnina dia famenoana fotodrafitrasa mahafinaritra sy fampitaovana tontolo iainana.
Ny UAE dia lasa toerana iray manerantany ihany koa mandritra ny fihaonambe, fampirantiana rezionaly sy iraisam-pirenena ary hetsika ara-panatanjahantena lehibe indrindra toy ny Dubai World Cup ho an'ny hazakazaka amin'ny soavaly, ny Abu Dhabi Formula One Grand Prix, ny Dubai Desert Classic Golf Tournament, ny FIFA Tompondaka eran-tany amin'ny klioban'ny klioba, fetiben'ny sarimihetsika eran-tany any Dubai ary koa an'i Abu Dhabi, ary miaraka amin'ny White House, ny Fihaonambe Global Entrepreneurship. Ny UAE dia nandresy tamin'ny tolotra hampiantrano ny tontolon'ny 2020 Expo.
Ny biraon'ny fitsangatsanganana an-tserasera lehibe indrindra any Royaume-Uni, ny expedia.co.uk dia nifidy Abu Dhabi ho iray amin'ny toeran-tany 10 mivezivezy any amin'ny 2008. Ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Dubai dia nahazo ny mari-pankasitrahana ho an'ny seranam-piaramanidina avaratr'i Moyen Orient amin'ny 2012 World Travel Awards.
Betsaka ny zavatra tokony hatao ao UAE mihoatra ny Dubai sy Abu Dhabi. Voahazona voalohany nandritra ny vanim-potoanan'ny rakitry ny ela, Sharjah no renivohitry ny kolontsaina emirates. Ny The Heritage Area of ​​Sharjah City dia ahitana ny Museum Maritime, Musie Islamika ary tranombakoka ho an'ny zavakanto arabo nentim-paharazana sy ankehitriny.
Manintona mpitsidika iraisam-pirenena i Ajman miaraka amoron-dranomasina mahafinaritra, toa an'i Fujairah izay manolotra ihany koa ny fisolokiana sy ny fitsirihana ary ny fitsangantsanganana ao amin'ny saikinosy Musandam, nalaza noho ny natiora tsy manam-petra amin'ny hantsam-bavony, vatom-bato ary vatohara.
Ras Al Khaima, eo amin'ny sisin-tany miaraka amin'i Oman, dia mety ho fanta-daza eo amin'ny mpitsangatsangana mpifaninana eo an-toerana ho an'ny tendrombohitra Hajjar mahery.
Visa / pasipaoro mandritra ny dia mankany UAE
1) Fampahalalana ankapobeny
rehetra Indiana amin'ny Indian pasipaoro manan-kery mandritra ny enim-bolana dia afaka miditra ao UAE.
2) Visa amin'ny pasipaoro diplaomatika sy ofisialy
Ny masoivoho dia mandefa visa amin'ny pasipaoro diplaomatika sy ofisialy ihany. Ny antontan-taratasy takiana momba izany dia:
Verbale avy amin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Indiana (raha misy ny tompon'andraikitry ny Governemanta Indiana) na avy amin'ny Misionan'ny diplaomaty voakasika (raha misy ny diploma na ny manam-pahefana miasa amin'ny iraka diplaomatika) .Toa ny fametrahana ny Verpooty verge dia tokony ho ao anatin'ny iray volana. ny daty nivoahany.
Nosoratana tao amin'ny Taratasy Modely ny taratasy fampiharana
tsy feno Visa Tsy tokony hohararaotina ny taratasy fangatahana.
Ny taratasy fangatahana Visa dia tsy maintsy nosoniavin'ny mpangataka amin'ny toerana voatondro ho an'ny soniany.
Ny takelaka manokana an'ny Sponsor ao UAE dia takiana ilaina.
Governemanta. Ny tompon'andraikitra dia tokony manonona ny Partikular momba ny Sponsor ho masoivoho na Consulate ao UAE, miaraka amin'ny tanjon'ny fidirana sy ny adiresy feno.
Ny dika avy amin'ny pasipaoro miloko (Pejy anarana, angon-drakitra manokana sy datin'ny lany daty) sy ny sarona (loko).
Saripika iray misy habe pasipaoro (tokony asiana).
3) Visa mpizaha tany ho any UAE
Ny masoivoho UAE dia tsy mamoaka visa amin'ny pasipaoro mahazatra.
Ny visa mpizahatany ho an'ny National Indian, izay mitazona pasipaoro mahazatra, dia nalamin'ny mpanohana iray ao UAE. Azo jerena ihany koa izy io amin'ny famandrihana hotely iray any UAE na amin'ny alàlan'ny Emirates Airlines Office na ny Air Arabia Office na amin'ny alàlan'ny Travel Agent any India.
4) Fanafoanana ny Visa
Ny masoivoho UAE dia tsy manafoana visa.
Mba hahafahana manafoana ny visa-nao dia mila mifandray amin'ny mpanohana anao any UAE izay nandamina ny visa ho anao ianao. Ny mpanohana anao dia manana fahefana tokana hanafoana ny visa-nao taloha. Raha tsy mahazo esorina ny visa teo aloha dia tsy afaka mahazo visa UAE vaovao ianao ary tsy afaka mandeha any UAE.
Very ny pasipaoro
Fomba fiasa ho an'ny fatiantoka entin'ny pasipaoro, misy visa visa an'ny UAE Residence.
Raha mikasika ny fahaverezan'ny pasipaoro Indiana ahitana visa visa Resy UAE, ireto antontan-taratasy ireto dia mila apetraka ao amin'ny Emperor Counter:
Fandraisana ho an'ny Passport Passport feno (amin'ny takelaka taratasy misy taratasy), miaraka amin'ireo laharana roa an'ny mpangataka (amin'ny faran'ny taratasy).
Ny kopian'ny loko pasipaoro taloha sy vaovao.
Ny kopin'ny loko UAE Residence Visa.
Taratasy avy amin'ny mpanohana any UAE, ary nilaza fa nandao an'i UAE ny mpangataka.
Kôpta momba ny polisy tany am-boalohany na FIR amin'ny teny anglisy, nohamafisin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny Indiana (Ny datim-pifidianana FIR dia tokony alohan'ny famoahana ny pasipaoro vaovao).
FANAVOTANA ARABIKA ny tatitra nataon'ny polisy momba ny pasipaoro very miaraka amin'ny tombo-kase an'ny mpandika teny arabo.
Sarin'ny sary iray amin'ny sary iray.
Ny adin'ny Dh 300 / -.
Raha vao atolotra ao amin'ny Emiraora Emiraire de UAE ireo antontan-taratasy ireo dia hampahafantarina ilay mpangataka rehefa vonona ny fahazoan-dàlana.
Fikomiana / fanarahan-dalàna amin'ny tahirin-kevitra
1) Fikomiana / fanarahan-dalàna amin'ny tahirin-kevitra
Ny olona tsirairay dia afaka mandefa ny antontan-taratasiny OWN, na antontan-taratasin'ny FIVORIANA MISY, rehefa mampiseho porofo momba ny maha-izy azy ary porofon'ny fifandraisana. Ny antontan-taratasin'ny namana dia azo atolotra amin'ny alàlan'ny fisoronana rehetra.
Ny dokam-barotra ara-barotra dia azo atolotra mivantana avy amin'ny orinasa nahazo alàlana - mpiasa. Taratasim-pahefana ao amin'ny Letterhead Company (miaraka amin'ny anaran'ny Mpiasa sy tombo-kase an'ny orinasa) ary ny kaontin'ny Company dia takiana amin'ity tranga ity.
2) Dingana atao amin'ny fanadiovana / fanovana ara-dalàna amin'ny tahirin-kevitra
Ny antontan-taratasy rehetra dia mila porofoina voalohany avy amin'ny sekta Consular an'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny any India, ary avy eo avy amin'ny Sekretera Consular, Vasant Kunj, New Delhi. Aza adino fa ny antontan-taratasy momba ny fanabeazana dia mila porofoin'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena momba ny fanjakana voakasika alohan'ny porofo momba ny 'Raharaha ivelany'. Ho fanamafisana ao amin'ny Consular Section, UAE Dirham 156.06 dia ny sarany isaky ny antontan-taratasy ary ny fotoana dia 9: 00 AM mankany 2: 00 PM, Alatsinainy hatramin'ny Alakamisy, ary 9: 00 AM mankany 12: 00 PM tamin'ny zoma. Ny antontan-taratasy dia azo alaina ao anatin'io andro io, eo anelanelan'ny 3: 00 sy 4: 00 PM, alatsinainy ka alakamisy, ary 2: 30 PM hatramin'ny 3: PMN XXXX tamin'ny zoma. Raha mila fanontanina, azafady mba alefaso aminay ny mailaka: consular@uaeembassy-newdelhi.com
Ny fanamarinana hafa toy ny Fanambadiana, Fiterahana, Fanandramana, Affidavits, FIRS amin'ny pasipaoro very, antontan-taratasy ara-barotra, sns .. dia tokony ho porofoin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny Indianina irery. Mijanona ho toy izany avokoa ny ambiny. Ny saram-pananana amin'ny antom-pivarotana dia miankina amin'ny raharaha ary ny saram-pandehan'ny invoice dia miovaova amin'ny sandan'ny Invoice. Azafady mba mifandraisa aminao amin'ny ambaratonga Consular Emirà Emirà raha misy fanontaniana.
3) Vola amin'ny fandefasana ny antontan-taratasy
Sarany any UAE Dirham
Tahirin-kevitra momba ny fanabeazana (diplaoma, ambaratonga, fanamarinana sekoly)
Bonafide taratasy fanamarinana
Taratasy ara-barotra nasionaly
Ny mari-pahaizana sy ny mari-pahaizana Madrasa
Famoahana taratasy fanamarinana
Taratasy fanamarinana anatiny
Fepetra momba ny fahaterahana
Fanamarinana ny fanambadiana
Taratasy fanamarinana fiofanana
Fialan'ny pasipaoron'ny pasipaoro
Herin'ny mpisolovava (manokana)
Taratasy fanamarinana momba ny zava-mahadomelina
Fahazoan-dàlana fisoratana anarana amin'ny mpitsabo
Taratasy fanamarinan'ny polisy
Copy of licence mitondra fiara, pasipaoro, sns.
Ny sandan'ny vidin'ny Invoice miaraka amin'ny sandan'ny Invoice
4) Takelaka Commerical
Factorization eo amin'ny olona, ​​raha manokatra orinasa iray
Factorization amin'ny alàlan'ny entana, rehefa amidy ao
Factorization amin'ny alàlan'ny entana, rehefa amidy any ivelany
Herin'ny mpisolovava manokatra orinasa eo amin'ny fanjakana.
Fanovana ny renivohitra mizara.
Fampidirana mpiara-miasa vaovao.
Franchise - manorina orinasa
Manokatra sampana vaovao amin'ny orinasa vahiny any amin'ny fanjakana.
Manokafana marika marika vaovao vaovao any ivelany ivelan'ny
fanjakana eo an-toerana
Business licence (izay zaraina amin'ireo firenena mihoatra ny iray ny kopia mba hanokafana sampana isaky ny fanjakana).
Ny fanatanterahana ireo tetikasa izay efa natao
vita amin'ny famitana ny vondrona tsirairay,
ao anatin'ny firenena na ivelan'ny firenena.
Tetibola ara-bola amin'ny orinasa
Fanidiana orinasa iray
Tetibola ara-bola arak'asa isan-taona
Ny fisoratana anarana momba ny fizahantany momba ny fizahantany
Fandraisana varotra (tsy miankina / vahoaka)
Fanesorana ny fahazoan-dàlana, fanendrena sampana Manager,
Fanokafana ny brnach, fitantanana ny orinasa Quotas
Cert. amin'ny Fandraisana ny Chamber of Commerce.
Minitra fanao amin'ny fivorian'ny birao mpitantana.
Ny dika mitovy amin'ireo masoivoho efa voamarina mialoha etsy ambony.
Miova ny fandoavany amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampilazana mialoha
5) ny fandoaovana ny invoice
Fanamarinana ny fitondran-tena tsara
1) Ny fahazoana ny fanondro manaporofo avy amin'ny Konsulin'i UAE
Mba hahazoana taratasy fahazoan-dàlana avy amin'ny polisy avy amin'ny Emirate of Emirà, dia mila maka ny rantsan-tànana amin'ny alàlan'ny ranomainty mainty ny biraon'ny polisy any an-tanànany ny mpilatsaka ho fidiana, avy eo avy amin'ny Ministeran'ny Faritra misy azy ary avy eo avy amin'ny ministeran'ny atitany Raharaha India. Ny adiresin'ny biraon'izy ireo dia ny Sekretera Consular, ny trano Patiala, Tilak Marg, akaikin'ny vavahady India. Ny biraon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny hafa dia any Chennai, Guwahati, Hyderabad ary Kolkata. Ilay mpilatsaka hofidina ihany koa dia afaka manatona mivantana ny Fingerprint Cell ao amin'ny tranon'ny Patiala mba hahafahana manao ny dian-tànana. Arotsaka ao amin'ny masoivoho UAE (amin'ny alàlan'ny tenany, na amin'ny alàlan'ny havany, na amin'ny alàlan'ireo tompon'andraikitra nahazo alalana ho antsika) avy amin'ny 9: 00 am a 12: 00 tolak'andro, alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Rs.3,750 / - dia ny saram-pianarana amin'ny CASH, ary haverina amin'ny andro iray ihany ny antontan-taratasy, eo anelanelan'ny 3: 00 hariva ary 4: 00 hariva.
2) Fandefasana ny fanoratana sary tanana natao tany UAE
Vantany vao voaray avy amin'ny Agent ianao dia mila mandefa azy ireo any amin'ny masoivoho mety any UAE. Azafady ampidino ireto zavatra manaraka ireto.
Ny volavolan-kaody nomen'ny alalàn'ny consulat UAE
Sarin'ny fahazoan-dàlana taloha tany UAE
Sarin'ny pasipaorao vao haingana
Saripika roa misy sary pasipaoro roa
Izay rehetra takiana (miankina amin'ny fahefana)
Alefaso any amin'ny masoivohon'ny Minisiteran'ny Atitany etsy ambany ireto ny entanao. Alohan'ny handefasana ireo antontan-taratasy dia antsoy ny Birao UAE mba hahazo fampahalalana momba ny saram-bola takiana, ary ho azo antoka fa aleonao any amin'ny fitsarana mifanaraka amin'izany izy ireo.
Jeneraly fanadihadiana momba ny heloka bevava
Fizarana fahazoan-dàlana sy fanamarinana
Polisy Dubai General HQ
Departemantan'ny polisy - Abu Dhabi
Ny polisy Sharjah
Manoro hevitra izahay handefa ny antontan-taratasy amin'ny namana iray any UAE, mba hahazoanao ny taratasy fanamarinana avy amin'ny sampan'ny polisy ho anao. Amin'izay dia hampihena ny fotoana ny fanodinana raha ampitahaina amin'ny fandefasana ireo antontan-taratasy mivantana any amin'ny sampana polisy.
Lisitry ny fanafody voafetra tao UAE
Ity ambany ity ny lisitry ny fanafody sy ny fanafody mifehy, voasoratra anarana miaraka amin'ny minisiteran'ny fahasalamana ao amin'ny UAE ary narotsaky ny Ministeran'ny Atitany sy ny Iraisam-pirenena Narcotic Controlled Board (INCB).
Ny fanampim-panontaniana bebe kokoa dia mety haseho any amin'ny departemanta mikarakara ny fanafody fitsaboana any Etazonia any Abu Dhabi, PO Box 848, Fax: + 971 2 6313 742.
Ity lisitra manaraka ity dia mampiseho ny laharam-pamantarana misy, anarana ara-barotra, anarana generika ary ny endriky ny fanafody.
1, takelaka CX 123, Codeine phosphate 8mg, Acetaminophen 325mg, Cafeine 30mg, Carbinoxamine maleate 3.06mg, Phenylephrine 5mg, Takela-bato
2, ABILIFY 10mg, Aripiprazole 10mg, takelaka
3, ABILIFY 15mg, Aripiprazole 15mg, takelaka
4, ABILIFY 20mg, Aripiprazole 20mg, takelaka
5, ABILIFY 30mg, Aripiprazole 30mg, takelaka
6, linctus sous l'Étlivement, Codeine Phosphate10mg, Triprolidine1.25mg, Pseudoephedrine 30mg / 5ml, Linctus
7, DM namboarina, Dextromethorphan 10mg, Triprolidine1.25mg, Pseudoephedrine 30mg / 5ml, Linctus
8, ACTIVELLE, Estradiol & Norethisterone, takelaka
9, ADOL hatsiaka, Dextromethorphan HBr 15mg, Pseudoephedrine HCL 30mg, Paracetamol 325mg, Caplets
11, ADOL totohondry, Codeine phosphate 10mg, Paracetamol 150mg, Cafeine 50mg, Salicylamide 200mg, Takelaka
12, AKINETON 2mg, Biperiden HCL 2mg, takelaka
13, AKINETON 5mg, Biperiden Lactate 5mg / ml, tsindrona
14, AKINETON RETARD 4mg, Biperiden HCL 4mg, takela-bato
15, ALGAPHAN, Dextropropoxyphene HCL 25mg Paracetamol 300mg, takelaka
16, ALGAPHAN, Propoxyphene HCL 75mg Chlorobutanol 10 mg / 2ml, tsindrona
17, ANAFRANIL 10, Clomipramine HCL 10 mg, takela-bato
18, ANAFRANIL 25, Clomipramine HCL 25 mg, takela-bato
19, ANAFRANIL SR 75, Clomipramine HCL 75 mg, takela-bato
20, ANDRIOL 40mg, Testosteron undecanoate 40mg, Capsules
21, ANEXATE 0.5mg / 5ml, Flumazenil 0.1mg / ml, tsindrona
22, ANEXATE 1mg / 10ml, Flumazenil 0.1mg / ml, tsindrona
23, ARTANE 2, Benzhexol HCL 2 mg, takelaka
24, ARTANE 5, Benzhexol HCL 5mg, takelaka
25, ARTHROTEC 50, Misoprostol 0.2mg Diclofenac sodium 50mg, takelaka
26, ATIVAN 1, Lorazepam 1mg, takelaka
28, AURORIX 100, Moclobemide 100mg, takelaka
29, AURORIX 150, Moclobemide 150mg, takelaka
30, AURORIX 300, Meclobemide 300 mg, takelaka
31, BARNETIL 200mg / 2ml, Sultopride 200mg / 2ml, tsindrona
32, BARNETIL 400, Sultopride 400mg, takelaka
33, BENZTRONE 5mg / ml, Oestradiol Benzoate 5mg / ml, tsindrona
35, BRONCHOLAR, Dextromethorphan HBr 7.5mg Guaifenesin 50mg, Ephedrine HCl 7.5mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg / 5ml, Mixte
36, BRONCHOLAR forte, Dextromethorphan HBr 15mg Ephedrine HCL 7.5mg, Guaifenesin 50mg, Chlorpheniramine malefaka 1.25mg / 5ml, Mixte
38, BUCCASTEM 3mg, Prochlorperazine Maleate 3mg, takela-bato
39, BUSPAR 10, Buspirone HCL 10mg, takelaka
40, BUSPAR 30 mg, Buspirone HCl 30 mg, tableta Dividose
41, BUSPAR 5, Buspirone HCL 5 mg, takelaka
42, CAMCOLITE 250, Lithium Carbonate 250mg, takela-bato
43, CAMCOLITE 400, Lithium Carbonate 400mg, takela-bato
44, CANTOR 50, Takelaka Minaprine 50mg, takelaka
47, CIPRALEX 10mg, Escitalopram (toy ny oxitate Escitlopram) 10mg / takelaka, takela-bato
48, Cipralex 10mg, Escitalopram, takelaka
49, CIPRALEX 15mg, Escitalopram (toy ny oxitate Escitlopram) 15mg / takelaka, takela-bato
50, Cipralex 15mg, Escitalopram, takelaka
51, CIPRALEX 20mg, Escitalopram (toy ny oxitate Escitlopram) 20mg / takelaka, takela-bato
52, Cipralex 20mg, Escitalopram, takelaka
53, CIPRALEX 5mg, Escitalopram (toy ny oxitate Escitlopram) 5mg / takelaka, takela-bato
54, CIPRAM 20, Citalopram 20 mg, takelaka
55, CLIMEN, Micronised Estradiol Valerate (mavokely) 2mg / 1tab, Micronised Estradiol Valerate (fotsy) 2mg / 1tab, Micronisedombeoterone Acetate (mavokely) tabilao 1mg / 1., Tablety.
56, CLOPIXOL 2, Zuclopenhtixol diHCL 2mg, takelaka
57, CLOPIXOL 25, Zuclopenhtixol diHCL 25mg, takelaka
58, CLOPIXOL -Anampy 100mg, Zuclopenhtixol acetate 100mg / 2ml, tsindrona
59, CLOPIXOL Depot 200, Zuclopenhtixol decanoate 200mg / ml, tsindrona
60, CLOPIXOL Depot 500, Zuclopenhtixol acetate 500mg / ml, tsindrona
61, CLOPIXOL10, Zuclopenhtixol diHCL 10mg, takelaka
62, CLOPIXOL-Acuphase 50mg, Zuclopenhtixol acetate 50mg / ml, tsindrona
69, CODIPRONT Cum Exp., Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Guaifenesin 100mg, Takelaka
70, CODIS, Aspirin 500 mg, Codeine Phosphate 8 mg, takelaka
72, CYTOTEC, Misoprostol 200mcg, takelaka
73, DEANXIT, Flupentixol diHCL 0.5mg, Melitracene HCL 10mg, takela-bato
74, DECA DURABOLIN 25mg / ml, Nandrolone Decanoate 25mg / ml, tsindrona
75, DECA DURABOLIN 50mg / ml, Nandrolone Decanoate 50mg / ml, tsindrona
76, DEHYDROBENZ-PERIDOL, Droperidol 2.5mg / ml, tsindrona
77, DEMETRIN 10, Prazepam 10mg, takelaka
79, DEXTROLAG, Dextromethorphan HBr 10mg, Guaifenesin 100mg, Chlorpheniramine maleate 2mg, Amonium klorida 25mg / 5ml, Syrup
80, DHC CONTINUS, Dihydrocodeine tartrate 60mg, takela-bato
83, DIAPAM 10, Diazepam 10mg, takelaka
84, DIAPAM 2, Diazepam 2mg, takelaka
85, DIAPAM 5, Diazepam 5mg, takelaka
86, DIARSED, Diphenoxylate HCL 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, takela-bato
87, DIAXINE, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, takela-bato
88, DIAZEPAM 2, Diazepam 2mg, takelaka
89, DIAZEPAM 5, Diazepam 5mg, takelaka
93, DISTALGESIC, Propoxyphene HCL 32.5mg Paracetamol 325mg, Takelaka
94, DOGMATIL 100, Sulpiride 100 mg / 2ml, tsindrona
95, DOGMATIL 25mg / 5ml, Sulpiride 25mg / 5ml, vahaolana
97, DOGMATIL Forte, Sulpiride 200 mg, takelaka
98, DORMICUM 15, Midazolam 15mg, takelaka
99, DORMICUM 15mg / 3ml, Midazolam 15mg / 3ml, tsindrona
100, DORMICUM 5mg / ml, Midazolam 5mg / ml, tsindrona
101, DORMICUM 7.5mg, Midazolam 7.5mg, takelaka
102, DORSILON, Mephenoxalone 200mg, Paracetamol 450mg, takelaka
103, EDRONAX 4mg, takelaka Reboxetine 4mg, takelaka
104, EFEXOR 37.5, Venlafaxine 37.5mg, takelaka
105, EFEXOR 75, Venlafaxine 75mg, takelaka
112, ESTROFEM, Oestradiol 2mg, takelaka
113, ESTROFEM FORTE, Oestradiol 4mg, takelaka
114, FAVERIN 100, Fluvoxamine maleate 100mg, takela-bato
115, FAVERIN 50, Fluvoxamine maleate 50mg, takela-bato
116, FEMOSTON 2 / 10, Dydrogesterone (Y) 10mg, Estradiol (O) 2.0mg, Estradiol (Y) 2.0mg, takelaka
117, FLEXIBAN, Cyclobenzaprine HCL 10mg / tab., Tablety
118, FLUANXOL 0.25, Flupenthixol 0.25mg, takelaka
119, FLUANXOL 0.5, Flupenthixol 0.5mg, takelaka
120, FLUANXOL 1, Flupenthixol 1mg, takelaka
121, FLUANXOL 3, Flupenthixol 3mg, takelaka
122, Deproody FLUANXOL, Flupenthixol 20mg / ml, tsindrona
123, FLUANXOL Depot, Flupentixol decanoate 100mg / ml, tsindrona
127, FLUXETYL 20mg, Fluoxetine (toa an'i F. Hydrochloride) 20mg / kapsul, Capsules
128, FRISIUM 10, Clobazam 10 mg, takelaka
129, FRISIUM 20, Clobazam 20 mg, takelaka
130, GARDINAL SODIUM, Phenobarbitone sodium 200mg / ml, tsindrona
131, GENOTROPIN 16 IU (5.3mg), Somatropin 16IU / 1Cartridge, Powder ho an'ny tsindrona
132, GENOTROPIN 36 IU (5.3mg), Somatropin 36IU / 1Cartridge, Powder ho an'ny tsindrona
133, HALDOL 0.5, Haloperidol 0.5mg, takelaka
134, HALDOL 2mg / ml, Haloperidol 2mg / ml, Drops
135, HALDOL 5, Haloperidol 5mg, takelaka
136, HALDOL 5mg / ml, Haloperidol 5mg / ml, tsindrona
137, HALDOL Decanoas, Haloperidol 50mg / ml, tsindrona
138, HALDOL Decanoas, Haloperidol 100mg / ml, tsindrona
140, IMUKIN 100mcg / 0.5ml, Recombinant Human Interferon-gamma 6000000 IU / ml, tsindrona *
141, INSIDON 50, Opipramol 50mg, takelaka
142, INTARD, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Sulphate atropine 0.025mg, takelaka
143, INTRAVAL, Thiopentone Sodium 0.5g / 1vial, tsindrona
144, IXEL 25mg, Milnacipran 25mg / kapsul, Capsules
145, IXEL 50mg, Milnacipran 505mg / kapsul, Capsules
147, KEMADRIN 10mg / 2ml, Procyclidine HCL 10mg / 2ml, tsindrona
148, KEMADRIN 5mg, Procyclidine HCL 5mg, takela-bato
149, KETALAR 10, Ketamine HCL 10mg / ml, tsindrona
150, KETALAR 50, Ketamine HCL 50mg / ml, tsindrona
151, KLIOGEST, Oestradiol 2mg, Norethisterone 1mg, takelaka
152, LAGAFLEX, Carisoprodol 300 mg, Paracetamol 250mg, takelaka
154, LARGACTIL 10, Chlorpromazine HCL 10mg, takela-bato
155, LARGACTIL 100, Chlorpromazine HCL 100mg, takela-bato
156, LARGACTIL 25, Chlorpromazine HCL 25mg, takela-bato
157, LARGACTIL 25mg / ml, Chlorpromazine HCL 25mg / ml, tsindrona
158, LARGACTIL 50, Chlorpromazine HCL 50mg, takela-bato
159, LARGACTIL 50mg / 2ml, Chlorpromazine HCL 50mg / 2ml, tsindrona
161, LEXOTANIL 1.5, Bromazepam 1.5 mg, takelaka
162, LEXOTANIL 3, Bromazepam 3 mg, takelaka
163, LEXOTANIL 6, Bromazepam 6 mg, takelaka
165, LIORESAL 10, Baclofen 10 mg, takelaka
166, LIORESAL 25, Baclofen 25 mg, takelaka
167, LOMOTIL, Diphenoxylate HCl 2.5mg, takila atropine 0.025mg, takelaka
168, LUDIOMIL 10, Maprotiline HCL 10mg, takela-bato
169, LUDIOMIL 25, Maprotiline HCL 25mg, takela-bato
170, LUDIOMIL 50, Maprotiline HCL 50mg, takela-bato
171, LUDIOMIL 75, Maprotiline HCL 75mg, takela-bato
173, MELLERIL 10, Thioridazine HCL 10mg, takela-bato
174, MELLERIL 100, Thioridazine HCL 100mg, takela-bato
175, MELLERIL 25, Thioridazine HCL 25mg, takela-bato
176, MELLERIL 50, Thioridazine HCL 50mg, takela-bato
177, MENOGON 75IU, Menotrophin HMG 75IU / 1Ampoule, tsindrona
178, MUSCADOL, Orphenadrine citrate 35mg, Paracetamol 450mg, takelaka
179, MYOGESIC, Orphenadrine 35mg, Paracetamol 450mg, takela-bato
184, NOCTRAN 10, Clorazepate dipot potassium 10mg, Acepromazine maleate 1.016mg, Aceprometazine maleate 10.16mg, takelaka
185, NORACOD, Codeine 10mg, Paracetamol 500mg, takela-bato
186, NORCURON 10mg, Vecuronium Bromide 10mg / ampoule, Powder ho an'ny tsindrona
187, NORCURON 4mg, Vecuronium Bromide 4.0mg / ampoule, Powder ho an'ny tsindrona
188, NORDITROPIN 12IU, Somatropine 12 IU, tsindrona
189, NORDITROPIN 4IU, Somatropine 4 IU, tsindrona
190, NORDITROPIN Pen dia nanangana 12, Somatropine 12 IU, tsindrona S / C
191, NORDITROPIN Pen dia nanangana 24, Somatropine 24 IU, tsindrona S / C
10mg / 1.5ml, Somatropin, naratra /
15mg / 1.5 ml, Somatropin, naratra /
5mg / 1.5 ml, Somatropin, naratra /
5mg / 1.5 ml, Somatropin, ratra amin'ny penina efa vita
10mg / 1.5 ml, Somatropin, naratra. amin'ny penina efa vita
15mg / 1.5 ml, Somatropin, naratra. amin'ny penina efa vita
198, NORFLEX, Orphenadrine citrate 30mg / ml, tsindrona
199, NORFLEX 100, Orphenadrine citrate 100mg, takela-bato
200, NORGESIC, Orphenadrine citrate 35mg Paracetamol 450mg, takelaka
201, NUBAIN 10mg / ml, Nalbuphine HCL 10mg / ml, tsindrona
202, NUBAIN 20mg / ml, Nalbuphine HCL 20mg / ml, tsindrona
203, Nuvaring, Etonogestrel & Ethinylestradiol, Volavola mandratra
204, ORAP, Pimozide 1mg, takelaka
205, ORAP Forte, Pimozide 4mg, takelaka
206, OXETINE, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, takelaka
207, PARACODOL, phosphate Codeine 8mg, Paracetamol 500mg, Eff.Tab.
208, PARACODOL, phosphate Codeine 8mg, Paracetamol 500mg, takela-bato
210, PHYSEPTONE, Methadone HCL 10mg / ml, tsindrona
211, PHYSEPTONE 5, Methadone HCL 5mg, takelaka
212, PREPULSID, Cisapride 1mg / ml, Fanidiana
214, PREPULSID 10mg, Cisapride 10mg, takelaka
215, PREPULSID 5mg, Cisapride 5mg, takelaka
216, PRIMOTESTONE depot 100mg, Testosteron Enanthate 110mg, Testosteron Propionate 25mg, = Testosteron 100mg / ml, tsindrona
217, PRIMOTESTONE depot 250mg, Testosteron enanthate 250mg / 1ml, tsindrona
218, PROGYLUTON, Estradiol Valerate 2mg / 11white tab., Estradiol Valerate 2mg & Norgestrol 0.5mg / tabilao voasary 10., Tablés.
219, PROKINATE, Cisapride 5mg / 5ml, fampiatoana
220, PROKINATE 10mg, Cisapride 10mg, takelaka
221, PROKINATE 5mg, Cisapride 5mg, takelaka
222, PROLIXIN 25mg / ml, Fluphenazine decanoate 25mg / ml, tsindrona
223, PROPESY, Prostaglandin E2 10mg / pessary, Pessaries fatra
225, PROTHIADEN 75, Dothiepin HCl 75mg, takela-bato
226, PROVIRON, tableta 25mg, takelaka
227, PROZAC, Fluoxetine 20mg, takelaka
228, PROZAC, Fluoxetine 20mg / 5ml, ranoka
229, PROZAC Weekly 90mg, Fluoxetine (toa an'i F. Hydrochloride) 90mg / kapsily, kapital
232, REMERON 15 mg, takela-bato Mirtazapine 15mg, takelaka
233, REMERON 30 mg, takela-bato Mirtazapine 30mg, takelaka
234, REMERON 45 mg, takela-bato Mirtazapine 45mg, takelaka
235, tabilaa Remeron Sol 30mg, Mirtazapine, takelaka
236, REVACOD, Codeine Phosphate 10mg, Paracetamol 500mg / 1 tabilao, tablety
239, RISPERDAL 1, takelaka risperidone 1mg, takelaka
240, RISPERDAL 1mg / ml, risperidone 1mg / 1ml, vahaolana am-bava
241, RISPERDAL 2, takelaka risperidone 2mg, takelaka
242, RISPERDAL 3, takelaka risperidone 3mg, takelaka
243, RISPERDAL 4, takelaka risperidone 4mg, takelaka
244, Risperidal Consta 25mg, risperidone, naratra / fampiatoana
245, Risperidal Consta 37.5 mg, risperidone, naratra / fampiatoana
246, Risperidal Consta 50 mg, risperidone, naratra / fampiatoana
247, RITALIN 10, Methylphenidate HCL 10mg, takela-bato
248, RITALIN SR 20mg, Methylphenidate HCL 20mg / 1tab., Tablés
250, RIVOTRIL 0.5, Clonazepam 0.5 mg, takelaka
251, RIVOTRIL 1mg / ml, Clonazepam 1mg / ml, tsindrona
252, RIVOTRIL 2, Clonazepam 2mg, takelaka
257, ROBAXIN, Methocarbamol 100mg / ml, tsindrona
258, ROBAXIN 500, Methocarbamol 500mg, takelaka
259, ROBAXISAL, Methocarbamol 400mg, Aspirin 325mg, takelaka
261, ROMILAR 1.5%, Dextromethorphan 15mg / ml, Drops
264, SAIZEN 4 IU, Somatropine 4 IU, tsindrona
266, SANDOSTATIN 0.05, Octreotide 0.05mg / ml, tsindrona
267, SANDOSTATIN 0.1, Octreotide 0.1mg / ml, tsindrona
268, SANDOSTATIN 0.2, Octreotide 0.2mg / ml, tsindrona
269, SANDOSTATIN 0.5, Octreotide 0.5mg / ml, tsindrona
273, SEDOFAN-P, Dextromethorphan HBr 15mg, takela-bato
274, SERENACE 0.5, Haloperidol 0.5mg, takelaka
275, SERENACE 1.5, Haloperidol 1.5mg, takelaka
276, SERENACE 10, Haloperidol 10mg, takelaka
277, SERENACE 5, Haloperidol 5mg, takelaka
278, SEROQUEL 100 mg, takelaka quetiapine 100 mg, takelaka
279, SEROQUEL 200 mg, takelaka quetiapine 200 mg, takelaka
280, SEROQUEL 25 mg, takelaka quetiapine 25 mg, takelaka
281, SEROQUEL Patient Starter Pack, Quetiapine 100 mg / tab. (Takelaka 2), Quetiapine 25 mg / tab. (Takelaka 6), takelaka
282, SEROXAT 20, Paroxetine 20mg, takelaka
283, SERZONE 100mg, nefazodone HCL 100mg, takelaka
284, SERZONE 150mg, nefazodone HCL 150mg, takelaka
285, SERZONE 200mg, nefazodone HCL 200mg, takelaka
286, SERZONE 250mg, nefazodone HCL 250mg, takelaka
287, SERZONE 50mg, nefazodone HCL 50mg, takelaka
288, SIRDALUD 2, Tizanidine 2mg, takelaka
289, SIRDALUD 4, Tizanidine 4mg, takelaka
290, SOMADRYL compound, Carisoprodol 200mg Paracetamol 160mg, Caffeine 32mg, takela-bato
293, SOSEGON 50mg, Pentazocine HCL 56.4mg, takela-bato
294, kohaka ST.JOSEPH, Dextromethorphan HBr 0.1179% w / w, Syrup
295, STADOL 1mg / ml, Butorphanol tartrate 1mg / ml, tsindrona
296, STADOL 2mg / ml, Butorphanol tartrate 2mg / ml, tsindrona
297, STADOL 4mg / 2ml, Butorphanol tartrate 4mg / 2ml, tsindrona
298, STELAZINE 1, Trifluoperazine 1mg, takelaka
302, STELAZINE 5, Trifluoperazine 5mg, takelaka
304, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg, takelaka
305, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 5mg, takelaka
306, STEMETIL, Prochlorperazine maleate12.5mg / ml, tsindrona
307, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg / 2ml, tsindrona
308, STERANDRYL RETARD 250mg, Testosteron Hexahydrobenzoate 125mg, Trans-hexahydroterephtalate of n-butyl ary Testosteron 125mg / ampoule, Fandidiana
310, STESOLID, Diazepam 2mg, takelaka
311, STESOLID, Diazepam 5mg, takelaka
312, STESOLID, Diazepam 5mg / ml, tsindrona
313, STESOLID, Diazepam 5mg / 2.5ml, vahaolana famokarana
314, STESOLID, Diazepam 10mg / 2.5ml, vahaolana famokarana
315, STILNOX 10mg, tabilao Zolpidem Tartrate 10mg / 1 tabilao, tablety
317, SUBUTEX 2mg, Buprenorphine HCL 2mg / 1tab., Tablés
318, SUBUTEX 8mg, Buprenorphine HCL 8mg / 1tab., Tablés
319, SURMONTIL 25, Trimipramine maleate 35mg, takela-bato
321, SUSTANON 250mg, Testosteron Propionate 30mg, Testosteron Phenylpropionate 60mg, Testosteron isocaproate 60mg, Testosteron decanoate 100mg, Injao
322, TEKAM 10, Ketamine HCL 10mg / ml, tsindrona
323, TEKAM 50, Ketamine HCL 50mg / ml, tsindrona
324, TEMGESIC 0.3mg / ml, Buprenorphine HCL 0.3 mg / ml, tsindrona
325, TEMGESIC 0.6mg / 2ml, Buprenorphine HCL 0.6mg / 2ml, tsindrona
326, TEMGESIC Sublingual, Buprenorphine HCL 0.2 mg, Takelaka
327, TIAPRIDAL 100, Tiapride 100mg, takelaka
328, TIAPRIDAL 100mg / 2ml, Tiapride 100mg / 2ml, tsindrona
329, TICLID, Ticlopidine 250mg, takelaka
331, TOFRANIL 10, Imipramine 10mg, takelaka
332, TOFRANIL 25, Imipramine 25mg, takelaka
334, TRAMAL 100mg / 2ml, Tramadol 100mg / 2ml, tsindrona
335, TRAMAL 100mg / ml, Tramadol 100mg / ml, Drops
337, TRAMAL 50mg / ml, Tramadol 50mg / ml, tsindrona
338, TRAMAL Retard 100, Tramadol 100mg, takelaka
339, TRAMUNDIN RETARD 100 mg, Tramadol 100mg, takela-bato
340, TRAMUNDIN RETARD 150 mg, Tramadol 150mg, takela-bato
341, TRAMUNDIN RETARD 200 mg, Tramadol 200mg, takela-bato
344, TREXAN 50, Naltrexone HCL 50mg, takela-bato
345, TRISEQUENS, Oestradiol 2mg (tabilao manga), Oestradiol 2mg, Norethisterone acetate 1mg (tabilao fotsy), Oestradiol 1mg (tabilao mena), takela-bato
346, TRISEQUENS forte, Oestradiol 4mg (tabilao mavo), Oestradiol 4mg, Norethisterone acetate 1mg (tabilao fotsy), Oestradiol 1mg (tabilao mena), takela-bato
347, TRYPTIZOL 25, Amitriptyline HCL 25 mg, takela-bato
349, TUSSIFIN miaraka amin'ny codeine, Codeine phosphate 75mg Chlorpheniramine maleate 25mg, glyceryl guaicolate 1gm, Sodium benzoate 3gm, Potasioma citrate 3gm, Liquorice 7.5gm / 100ml, Syrup
350, ULTIVA 1mg, Remifentanil 1mg / voan'ny, tsindrona
351, ULTIVA 2mg, Remifentanil 2mg / voan'ny, tsindrona
352, ULTIVA 5mg, Remifentanil 5mg / voan'ny, tsindrona
353, DM tsy manam-petra, Triprolidine HCl 1.25 mg, Pseudoephedrine (HCl) 30mg, Dextromethorphan HBr 10 mg / 5ml, Syrup
355, VALIUM, Diazepam 10mg / 2ml, tsindrona
356, VALIUM 10, Diazepam 10mg, takelaka
357, VALIUM 2, Diazepam 2mg, takelaka
358, VALIUM 5, Diazepam 5mg, takelaka
359, VECURONIUM BROMIDE HANAO INJEKIANA 10mg, Vecuronium Bromide 10mg / vava 1, Fangaro amin'ny tsindrona
360, VECURONIUM BROMIDE HANAO INJEKIANA 20mg, Vecuronium Bromide 20mg / vava 1, Powder ho an'ny tsindrona
362, VIRORMONE 10mg, Testosteron Propionate 10mg, tsindrona
363, VIRORMONE 10mg, Testosteron Propionate 10mg, takela-bato
364, VIRORMONE 25mg, Testosteron Propionate 25mg, takela-bato
365, VIRORMONE 25mg, Testosteron Propionate 25mg, tsindrona
366, XANAX 0.25, Alprazolam 0.25 mg, takelaka
367, XANAX 0.5, Alprazolam 0.5 mg, takelaka
368, XANAX 1, Alprazolam 1 mg, takelaka
369, Zeldox 20mg / ml, Ziprasidone, Injao / Injao
370, ZOLOFT, Sortraline 50mg, takelaka
371, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, takela-bato
372, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, tsindrona
373, ZYPREXA 5 mg, Olanzapine 5 mg, takela-bato
374, ZYPREXA 7.5 mg, Olanzapine 7.5 mg, takela-bato
KOROHITRA MANGALATRA / FANAOVANA
TSY MISY FIKAMBANANA ARABIA
Kaody Abu Dhabi Sekretera kabinetra
Ajman Chamber of Commerce & Indostria Commission Commission
Kaody Abu Dhabi Minisiteran'ny fambolena
Fiarovana sivily ao Dubai Sampana fampianarana angovo
Dubai Chamber of Commerce & Industry Ministry ny Chemical & Fertilizer
Kaominin'i Dubai Minisiteran'ny fiaramanidina sivily
Filankevitra nasionaly federaly Minisitry ny arintany sy ny harena ankibon'ny tany
Federasiona misahana ny fivarotana UAE & Indostria Minisitry ny varotra sy ny indostria
Ministeran'ny toekarena & Varotra Minisiteran'ny serasera
Minisiteran'ny herinaratra sy rano Minisiteran'ny asa aman-draharaha
Minisiteran'ny fahasalamana Minisiteran'ny mpanjifa & fitsinjarana vahoaka
Minisiteran'ny fanjakana ho an'ny raharaha kabinetra Minisiteran'ny Kolontsaina
Minisiteran'ny fampianarana & ny tanora Minisiteran'ny fanapotehana
Ministeran'ny famatsiam-bola & indostria Ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala
Minisiteran'ny drafitra Minisiteran'ny raharaham-bahiny
Munisipaly Sharjah Minisiteran'ny Fitantanam-bola
Sharjah Chamber of Commerce & Industry Ministeran'ny indostria fanodinana sakafo
Governemanta UAE Minisiteran'ny fahasalamana sy ny fiadanan'ny fianakaviana
Fifandraisan'ny Bilateralà UAE-INDIA
Ny fifandraisana ara-toekarena, politika ary kolontsaina ao UAE, izay efa hatramin'ny taonjato maro lasa izay dia matotra sy marobe. Ny varotra bilateral dia nitombo hatrany amin'ny taona maro ary mihamitombo hatrany ny fifandraisan'ny olona-amin'ny olona. Ny mpitsangatsangana avy amin'ny andaniny roa dia mitsidika ny fialam-boly sy ny fahafinaretana ary mihamaro hatrany ireo teratany UAE izay miditra amin'ny fahasalamana sy ara-pizahan-tany any India.
Ny fifamatorana akaiky eo amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Indiana sy ny zom-pirenena dia azo araraina satria ny fiarahamonina Indiana no vondron'olona expatriat lehibe indrindra any UAE, izay mitentina 1.5 tapitrisa. Ny fifamatorana mafy eo amin'ny fifandraisan'ny UAE sy India dia omena vahana kokoa sy hamafisina bebe kokoa amin'ny volana sy taona ho avy.
Ny ampahany amin'ny tafatafa tamin'ny Ambasadaoro Indiana tany UAE Talmiz Ahmed.
Ny fifandraisana eo amin'ny UAE sy India dia matanjaka ary mifototra amin'ny fifandraisana ara-kolontsaina misy eo amin'ny samy firenena roa. Inona ireo fanao ara-tantara mamatotra ireo firenena roa ary inona ny paikady vaovao hanamafisana ny ara-kolontsainany sy ny fomban-drazana?
Ny fifandraisan'i India-UAE dia eo am-pitandremana. Mizara fifamatorana ara-kolontsaina ireo firenena roa ireo ary manana fifandraisana ara-barotra sy kolontsaina matanjaka. Ny fifamatoranay dia manarona ny sehatry ny lafiny ara-toekarena, ara-teknika, ara-tsosialy ary kolontsaina izay mahasoa ho an'ny vahoaka roa tonta.
Fotoana iray amin'ny fitomboan'ny fifandraisan'i India amin'ireo firenena any amin'ny Golfa, indrindra ny UAE, nomen'ny fitsidihan'ny minisitry ny raharaham-bahiny Shaikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan tany India tamin'ny volana jona. Nandritra ny fitsidihana dia samy nifamaly sy nifankahita avokoa ny roa tonta momba ny lohahevitra marobe, anisan'izany ny fifandraisan'ny bilateral, ny toerana misy, ny fiarovana, ny fiarovana ary ny angovo azo havaozina. Avy amin'ny lafiny Indiana, ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Pranab Mukherjee sy ny minisitry ny varotra sy ny indostria Kamal Nath dia nitsidika an'i UAE tamin'ny volana Mey sy aprily 2008.
Ny fifandraisanay dia tsy voafaritra amin'ny lafiny ara-barotra sy ny toe-karena irery. Ny Indiana dia nanatrika tao UAE talohan'ny nahitana ny solika ary nitana andraikitra lehibe teo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Efa mpiray antoka izy ireo niaraka tamin'ny mpampiantrano azy ao Emirati. Neken'ny mpitarika ny UAE matetika ny fandraisana anjara nataon'ny Indianina tamin'ny faritra samihafa.
Inona avy ireo fampivoarana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny varotra eo amin'ny firenena roa?
India ary ny UAE dia manao ezaka mafy hanavaozana sy hanamafisana ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-barotra. Ny fifandraisan'ny firenena roa tonta dia nanjary fiaraha-miasa lehibe teo amin'ny sehatry ny toekarena sy ara-barotra, ka ny UAE dia mipoitra ho tsena faharoa lehibe indrindra eran-tany ho an'ny vokatra indianina. Tamin'io fotoana io ihany dia nipoitra ny mpampiasa indiana ho mpamatsy vola lehibe ao UAE, ary i India dia toerana manondrana entana lehibe ho an'ny mpanamboatra UAE.
Ahoana ny fomba varotra roa tonta teo amin'ny firenena roa tamin'ny taon-dasa? Ny varotra tsy mandeha amin'ny solika Inde-UAE dia mitentina $ 29,023.68 amin'ny 2007-2008. Ny varotra roa tonta ho an'ny 2007-2008 dia nampiseho fitomboana 40 isan-jato tamin'ny taon-dasa. Ny zavatra lehibe indrindra amin'ny fanondranana avy any India dia ahitana solika mineraly, voahangy voajanahary na voambolana, voamadinika, vatosoa ary firavaka, yana, vita amin'ny marika, vita amin'ny landy, vokatra an-dranomasina, milina ary fitaovana, plastika sy linoleum vokatra, dite sy hena ary fanomanana. Ny entana lehibe amin'ny fanafarana avy any UAE dia ny solika mineraly, menaka mineraly, perla voajanahary na kolontsaina, vato sarobidy na semi-sarobidy, vy ores & tariby metaly, solifara ary pyrites vy tsy voadio, milina elektrika sy fitaovana ary tapany, vy sy vy.
Ny ampahany lehibe amin'ny fanondranana any India any UAE dia mifindra avy any Dubai mankany amin'ny firenena hafa any amin'ny faritra toa an'i Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Yemen ary, any amin'ny firenena afrikanina atsinanana. Noho izany, ny fanondranana entana any UAE dia, nanokatra ny tsenam-paritra goavana ho an'ny vokatra indianina.
Misy ambangovangony ve ny fitomboana eo amin'ny varotra roa tonta ary ny fampiasam-bola eo amin'ny firenena roa tonta?
Ny fiakarana mivaingana amin'ny fifanakalozana ara-pokojantsika, indrindra ny sehatra tsy mandeha amin'ny solika dia taratry ny fitomboana sy ny halalin'ny toekarena roa. Ny orinasa Indiana sy UAE dia mandray anjara mavitrika amin'ny fikatsahana ny famatsiam-bola sy tetikasa any amin'ireo firenena roa ireo. Ireo fiaraha-miombon'antoka fiaraha-miasa ireo dia ahitana ny sasany amin'ireo orinasa lehibe indrindra avy any India toa an'i Tata, Reliance, Wipro, NTPC, Larsen & Toubro, Dodsals ary Punj Lloyd. Avy amin'ny lafiny Emirati, ny orinasa ambony any India dia Emaar, Nakheel, DP World, sns .. Tamin'ny Oktobra lasa teo, nisy MoU teo anelanelan'ny UAE University sy India's Atul Limited nosoniavina ho fiaraha-miasa stratejika ho famindrana ny teknolojia hananganana fanjakana - of-the-art date famokarana vondron-kolontsaina palmie any Rajasthan.
Ohatrinona ny isan'ireo olona indianina sy mpandraharaha any UAE?
Tsiahivina fa manodidina ny 1.5 tapitrisa ny Indianina mipetraka any UAE. Tsy firy ireo no nandao ny firenena tato ho ato. Ny krizy eran'izao tontolo izao dia natao hanamafy orina fotsiny ny fanalavirana tsy hiasa amin'ny asa maloto fa tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny tetikasa lehibe indrindra, foto-drafitrasa ary tetik'asa trano notadiavina ao amin'ny firenena, indrindra ny any Dubai sy Abu Dhabi, satria azo ampiasaina ny famatsiam-bola. tetikasa mifandraika amin'ny fampandrosoana nasionaly. Noho izany, ny krizy ara-toekarena ankehitriny dia tsy azo inoana fa misy fiantraikany lehibe amin'ny fitadiavana ny Indiana.
Inona ny fanjakan'ny fizahan-tany eo amin'ny firenena roa?
Ny sehatry ny fizahantany dia iray amin'ireo sehatra izay manana fahaiza-manao tsara amin'ny fitomboana, indrindra ny fizahantany ara-pitsaboana. Emiratis mankany India dia efa mampiasa serivisy fahasalamana Indiana, ao anatin'izany ny ayurvedic establishments sy spas. Faritra iray manana elanelana ho fiaraha-miasa eo amin'ny fizahan-tany dia ny fanamboarana sy fikojakojana ny hotely. Misy sehatra tsara ho an'ny UAE hametraka vola amin'ny sehatry ny fizahantany any India, izay hanampy ny mpizahatany hitsidika ny UAE ho any India koa.
Hisy dingana vaovao sy mavitrika kokoa amin'ny fifandraisana UAE-India ve amin'ny ho avy?
Ny fandinihana ireo zava-misy manerantany, ny fifamatorana eo amin'i India sy ny UAE dia mahazo refy vaovao. Nametraka fiaraha-miasa matanjaka teo amin'ny sehatry ny varotra sy ny varotra ireo firenena roa ireo. Niara-niasa, nanamafy ary nipoitra ho fiaraha-miasa stratejika ity fiaraha-miasa ity miaraka amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiarovana, ny angovo, sns. I UAE amin'ny maha mpifanolobodirindrina dia hojerena voalohany indrindra amin'ny fanavaozana ny fifamatoranay.
Samy mety hiara-hiasa ny roa tonta sy ny faritra amin'ny resaka fiarovana sy fiarovana ny firenena roa ary mety ho mpiara-miasa amin'ny ady manerantany hiady amin'ny fampihorohoroana sy ny extremisma.
Satria ny UAE dia mifantoka amin'ny indostrian'ny fahalalana mifototra amin'ny fahalalana sy ny fisongadinan'i India amin'ny maha-mpitondra an'izao tontolo izao ny sehatra, ny fambolena, ny fanafody ary ny teknolojia bio, misy sehatra lehibe ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny famindrana ny teknolojia, R&D ary ho an'ny fiaraha-miasa miaraka. Nahatratra ny haavony vaovao ny fiaraha-miasa fiarovan-tena niaraka tamin'ny fanatanjahantena an'habakabaka India-UAE voalohany ary ny fivorian'ny Komity Mpanohana ny fiaraha-miasa India-UAE. Nahazo fanohanana mafy ny lafiny UAE i India momba ny olan'ny fampihorohoroana, indrindra ny fanafihana fampihorohoroana any Mumbai tamin'ny Novambra lasa teo.
Ara-toekarena sy varotra
Ny fifandraisan'ny India sy ny UAE dia efa nisy hatramin'izay. Ny fitomboana ny fifandraisana ara-ekonomika sy ara-barotra Indo-UAE dia miteraka fahatokiana lehibe sy tanjaka amin'ny fifandraisana ara-batana eo amin'ny firenena roa tonta. Ny UAE dia mankafy fifandraisana ara-toekarena mivelatra sy India manontolo, mifototra amin'ny tombontsoan'ny tsirairay.
Ny volan'ny fifanakalozana ara-barotra ankehitriny dia milaza fa izao no fotoana mampientam-po eo amin'ny tantaran'ny fifandraisana ara-toekarena ao UAE-India. Araka ny filazan'ny governemantan'i India dia ny UAE no mpiara-miasa ara-barotra faratampony ao India ho an'ny taona ara-bola 2008-09, miaraka amin'ny tarehimarika an'ny UAE dia mampiseho an'i India ho mpiara-miasa aminy ambony ao 2008.
Araka ny tarehimarika nanjakan'ny India, ny varotra ara-barotra eo anelanelan'i India - UAE ho an'ny taona ara-bola Aprily 2008 - Martsa 2009 dia US $ 44.53 lavitrisa dolara raha oharina amin'ny US $ 29.11 miliara nandritra ny vanim-potoana mitovy tamin'ny april 2007 - Martsa 2008, fitomboan'ny 52.95% . Araka ny tarehimarika an'ny fitondrana UAE, tao amin'ny 2008 ny UAE - ny varotra ara-barotra roa an'ny India dia tafakatra 48 isan-jato isan-jaton'ny 2007 ka mahatratra manodidina ny USD 32 miliara, kaonty 15 isan-jaton'ny varotra vahiny any Emirates.
Ny fanondrana indianina any UAE dia misy ny firavaka sy firavaka, legioma, voankazo, zava-manitra, entana ara-injeniera, dite, hena sy ny fanomanana azy, vary, lamba sy fitafiana ary simika. Ny fanafarana Indiana avy any UAE dia miompana amin'ny vokatra crude & petroleum, volamena & volafotsy, perla, vatosoa ary vato semiprecious, ore metaly & vy akorandriaka, entana elektronika ary fitaovana fitaterana entana.
Ny fampiasam-bola UAE any India dia hita fa mitombo ihany koa tato anatin'ny taona vitsivitsy. UAE dia namatsy vola amerikana 5 lavitrisa tao India tamin'ny alàlan'ny lalana FDI (Foreign Direct Investment) ary FII (Foreign Institution Investors) lalana izay mahatonga an'i UAE ho isan'ireo mpampiasa vola ambony ao India. Ny orinasam-pifandraisana lehibe any UAE izay namatsy vola an'i India dia izao tontolo izao DP, Emaar Group, Al Nakheel, ETA Star Group, SS Lootah Group, Emirates Techno Casting FZE, RAK Investment Authority, Damas Jewellery ary Abu Dhabi Commercial Bank.
India dia mpampiasa vola fahatelo lehibe indrindra any UAE. Ny orinasa indiana toa an'i L&T, Punj Lloyd, vondrona Hinduja, Pioneer Cement, Oberoi Group of Hotely, dia nanamboatra tetikasa any UAE. Taorian'ny fivoahan'ny UAE ho ivon-toerana fanondranana indray, ny orinasa indiana dia nipoitra ho mpampiasa vola lehibe any amin'ny faritra ara-barotra maimaimpoana toy ny Jebel Ali FTZ, seranam-piaramanidina Sharjah, Zaza malalaka Hamariya ary Abu Dhbai Industrial City.
Ny antony iray marim-pototra momba ny fifandraisana ara-toekarena Indo-UAE dia vahoaka teratany indianina any UAE. Saika ny 2 tapitrisa indianina any Indianina no mipetraka sy miasa any UAE, izay misy ny 30 isan-jaton'ny isan-jaton'ny mponina ao amin'ny firenena Emirates lehibe indrindra any Emirates. Ny vondrom-piarahamonina vahiny dia mandray anjara amin'ny toekarena Indiana ihany koa. Ny fitateram-bolam-bidy any India avy any UAE amin'ny 2008-09 dia manodidina ny USD 10 -12 lavitrisa, izay manodidina ny ampahatelon'ny vola azo avy amin'ny firenena GCC mankany India izay manodidina ny USD 32-25 lavitrisa.
Rohy mifandraika amin'ny firenena roa
Misy mihoatra ny sidina 475 isan-kerinandro eo anelanelan'ny toerana samihafa any India sy UAE, nozarain'i Emirates, Etihad, Air Arabia, Kingfisher, Jet Airways, Air India ary Air India Express. Amin'ity seranam-piaramanidina nasionaly UAE telo ireto (Emirates, Etihad ary Air Arabia) dia mandeha amin'ny zotra 304 isan-kerinandro izay maneho ny 64% amin'ny sidina rehetra miasa amin'ity sehatra ity.
Manana fifanarahana amin'ny serivisy fiaramanidina (ASA) i India sy ny Emirà Arabo Mitambatra. Ny fifanarahana dia mamela ireo firenena roa ireo hanendry orinasa an'habakabaka maromaro ho an'ny fampandehanana serivisy nifanarahana izay tokony hanomean-dàlana sy fanomezan-dalana mifanaraka amin'izany.
Fanabeazana & Fampandrosoana
Manamafy orina amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny sampam-pampianarana mpizaha tany sy ny oniversite any India sy ny oniversite fikarohana ambony. Mampiroborobo ny fiaraha-miasa siantifika, ao anatin'izany ny sehatry ny angovo azo havaozina, fampandrosoana maharitra, fambolena sy fiompiana, ekolojia an'efitra, fampandrosoana ny tanàn-dehibe ary fikarakarana ara-pahasalamana mandroso.
Sheikh Zayed - Ilay Mpanorina
Ilay Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahayan, mpanorina ny Emirates Arabo Mitambatra, dia teraka tao 1918 tany Abu Dhabi. Izy no zandriny indrindra amin'ireo zanakalahy efatra avy amin'i Sheikh Sultan bin Zayed, izay nanjaka an'i Abu Dhabi tamin'ny 1922 - 1926. Nifindra niaraka tamin'ny fianakaviany avy tany Abu Dhabi nankany Al Ain i Sheikh Zayed, izay nahazoany ny foto-pinoany ara-pinoana ary nianatra ny fitsipiky ny finoana silamo ary nandalina ny Korany Masina. I Sheikh Zayed kosa dia tia falconry ary nankafy fihazana sy fanatanjahan-tena nentim-paharazana hafa toy ny rameva sy ny soavaly.
Tao amin'ny 1946, i Sheikh Zayed dia notendrena ho mpitondra any amin'ny faritra Atsinanana Abu Dhabi (Al Ain), ary nandritra ireo taona 20 izay nitondrany an'i Al Ain dia tsy niaro ny ezaka natao hananganana sy hanodinana ny vohitra manodidina izany izy.
Tao amin'ny 1966, i Sheikh Zayed dia lasa Mpitondra an'I Abu Dhabi ary nandritra ny fananganana ny emirate, ny fananganana sekoly, ny hopitaly ary ny lalana, ny fahatsapany ara-politika sy ny fijeriny ho futuristra dia nanodika ny sainy hamorona firaisan-kina miaraka amin'ireo amina mpifanolo-bodirindrina aminy amin'ny Golfa Arabo. Izy no voalohany niantso ny fananganana ny Emira Arabo Mitambatra avy hatrany taorian'ny nilazan'i Britain fa hiala amin'ny faritra izany. Tamin'ny volana Desambra 2 nd, 1971, i Sheikh Zayed ary ireo mpitondra ny emirates enina dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Emiriora Arabo sy ny nofin'i Sheikh Zayed.
Hatramin'ny niorenany, i Sheikh Zayed dia niara-niasa tamin'ny rahalahiny, mpanapaka ny emirates, nanova ny firenena ary namadika azy ho iray amin'ireo firenena manankarena indrindra ao amin'ilay faritra. Nahay nitantana ny vola azon'ny solika ao amin'ny firenena izy mba hampiakarana ny fomba fiainan'ny olom-pirenena sy mponina ao amin'ny UAE ary hanomezany fiainana tsara kokoa. Ny fahatsapan'ny fahendrena sy ny fahitan'i Sheikh Zayed dia tsapa ao anatiny sy ivelan'ny firenena. Nahazo fankatoavana avy amin'ny faritra sy iraisam-pirenena tsy nisy toy izany teo aloha izy.
Nodimandry tamin'ny volana Novambra 2 nd 2004 i Sheikh Zayed, saingy mbola miaina ao an-tsain'izao tontolo izao ho an'ireo mpitondra lehibe sy ao am-po sy ao an-tsain'ny olony mandritra ny taranaka maro mifandimby.
Ny United Arab Emirates dia fanjakana federaly mahaleo tena, izay napetraka tao 1971. Ny ezaka iraisan'ny governemantany dia natao ho fanatsarana ny fahombiazan'ny UAE sy ny fivoarana amin'ny sehatra rehetra ary hanomezana fiainana tsara indrindra ho an'ny olom-pirenena rehetra ao UAE.
Ny fahalehibiazany Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan dia voafidy ho filohan'ny Emira Arabo Mitambatra tamin'ny faha-3rd of November, 2004 taorian'ny nandalasan'ny rainy efa maty HH Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, izay filoha voalohany tao amin'ny UAE .
Andraikitry ny filohan'ny UAE
Sady mitantana ny filankevitra ambony indrindra ary mitantana ny fifanakalozan-kevitra.
Antso ny filankevitra ambony indrindra amin'ny fivoriana ary apetraho ireo araka ny fitsipi-dàlana nankatoavin'ny filankevitra ao amin'ny didim-panjakana anatiny. Tsy maintsy miantso fivoriana ny filankevitra isaky ny mangataka azy ireo ny mpikambana ao aminy.
Miantso fivoriana iraisana miaraka amin'ny filankevitra ambony indrindra sy ny kabinetra federaly raha ilaina izany.
Hanao sonia ary hamoaka lalàna, didim-pitsarana ary fanapahan-kevitra federaly izay eken'ny filankevitra ambony.
Asao ny praiminisitra, ekeo ny fialany, ary avelao izy hametra-pialana amin'ny toerany miaraka amin'ny fankatoavan'ny filankevitra ambony, hanendry ny praiminisitra lefitra sy ny minisitra, manaiky ny fialany ary mangataka azy ireo hametra-pialana amin'ny toerany amin'ny fangatahan'ny praiminisitra. fanompoam-pivavahana.
Tendreo ny solontenan'ny diplaomatika ho an'ny federasiona any amin'ireo firenena vahiny sy sivily sivily sivily, ary mpiasan'ny miaramila afa-tsy ny filoham-pirenena sy ny mpitsara ny fitsarana federaly faratampony, dia manaiky ny fialàn'izy ireo ary mangataka azy ireo hametra-pialana amin'ny alàlan'ny faneken'ny kabinetra. Ny fanendrena toy izany, ny fanekena ny fametraham-pialana na ny fanilihana dia tokony hatao Araka ny fanapahana sy ny fankatoavana ny lalàna federaly.
Famantarana ny taratasy fahamarinan'ireo solontena diplaomatika ao amin'ny Vondron'olona any amin'ny firenena sy fikambanana any ivelany ary manaiky ny fahazoan-dàlana ireo solontena diplaomatika sy consular any amin'ny firenena vahiny ho any amin'ny Vondrona ary mahazo ny taratasiny. Hanao sonia toy izany koa ny antontan-taratasy momba ny fanendrena sy ny fahatokisan'ny solontena.
Manara-maso ny fanatanterahana lalàna federaly, didim-pitsarana ary fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny kabinetra federaly sy ny minisitra mahay.
Solontena amin'ny federasiona ao amin'ny firenena sy any ivelany ary amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena rehetra.
Mampihatra ny zon'ny famotsoran-keloka na mampihena ny fanasaziana ary ankatoavinao ny sazy an-drenivohitra mifanaraka amin'ny fepetra ao amin'ny lalàm-panorenana sy ny lalàna federaly.
Ny fanomezana firavaka sy medaly fanomezam-boninahitra, na sivily na miaramila, mifanaraka amin'ny lalàna mifandraika amin'ny haingo sy medaly toy izany.
Ny fahefana hafa rehetra natolotry ny Filankevitra ambony na nomena azy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana na ny lalàna federaly.
Tantaran'ny fahalehibiazany Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Ny fahalehibiazany Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan dia filoha faharoa an'ny Emirates Arabo Mitambatra, izay ny fananganana azy dia nambara tamin'ny 2 tamin'ny volana Desambra, 1971. Izy no mpitondra fahenina ambin'ny folo amin'ny emirate Abu Dhabi, izay no lehibe indrindra amin'ny emirates fito izay ny federasiona.
Ny fahalehibiazany no nandray ny fahefan'ny lalampanorenana federaly ho filohan'ny UAE ary lasa mpitondra ny emirate Abu Dhabi tamin'ny 3 rd ny volana novambra 2004, nandimby ny rain'i Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan izay nandao ny 2 nd tamin'ny Novambra 2004.
Teraka tao 1948 tany amin'ny faritra atsinanan'ny emirate Abu Dhabi ny Avo Indrindra ary nahazo ny fianarany voalohany tao an-tanànan'i Al Ain, izay no toeram-pitantanan-draharaha ho an'ny faritra. Zanany lehibe indrindra amin'ny alàlan'i Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan izy ary ny reniny dia Her High She She His Hissa Bint Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.
Ny havany izay avo indrindra dia avy amin'ny foko Bani Yas, izay heverina ho firenena renin'ny ankamaroan'ny foko Arabo izay mipetraka amin'ny fantatra ankehitriny fa Emira Arabo Mitambatra. Ity foko ity dia nitondra firaisankina avy amin'ny foko arabo, izay fantatra amin'ny tantara fa "Bani Yas Alliance".
Narahin'ny fahalehibiazany ny dadany, Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan nandritra ny androm-piainany manontolo. Ny lahatsoratra voalohany izay notompoiny dia "solontenan'ny mpitondra any amin'ny faritra atsinanana, ary lehiben'ny fitsarana tany" tamin'ny 18 tamin'ny volana septambra, 1966. Ity toerana ity dia nisy dikany lehibe teo amin'ny fiainany. Raha nijanona tao an-tanànan'i Al Ain ny Lehibe Indrindra dia nomena fotoana lehibe hifandraisana amin'ireo olom-pirenena UAE isan'andro izy, dia ho fantatrao tsara ny fepetra apetrany ary fantaro ny tanjony sy ny fanantenany.
Ny Avo Indrindra dia notendrena ho andriana ho an'ny emirate Abu Dhabi tamin'ny 1 st tamin'ny volana febroary, 1969 ary lehiben'ny departemantan'ny fiarovana. Noho io toe-javatra io dia naka ny fitarihana ny hery fiarovan-tena tany amin'ny emirate izy ary nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampandrosoana azy ary namadika azy avy amin'ny tafika mpiambina kely ho hery multifunction izay manana fitaovana maoderina.
Tamin'ny 1 st tamin'ny Mey, ny 1971, ny Highness Sheikh Khalifa dia nitazona ny toeran'ny "filohan'ny kabinetra teo an-toerana ho an'ny emiriora Abu Dhabi" ary naka sary ny fiarovana sy ny fitantanam-bola ao amin'ity kabinetra ity.
Taorian'ny fanambarana ny fanjakana federaly, ny fahalehibiazany no nitazona ny andraikiny teo an-toerana ny afon'ny “filoha lefitry ny kabinetran'ny governemanta federaly, izay niforona tamin'ny volana Desambra 1973.
Tamin'ny volana faran'ny volana 1974, ary taorian'ny fanesorana ny kabinetra ao an-toerana, dia ny filoham-pirenena voalohany no filohan'ny filankevitra mpanatanteraka izay nanolo ny kabinetran'ny emirato ary anisan'izany ny andraikiny.
Nandritra ny tenin'ny fiadidian'ny filankevitra mpanatanteraka, ny Highness dia nanara-maso sy nanara-maso ny tetikasa fampandrosoana nanatri-maso nanerana ny faritra rehetra tao amin'ny emirate Abu Dhabi. Ankoatr'izay, ny fahalehibeazany dia nanome fiheverana lehibe ny fampandrosoana sy ny fanavaozana ny tetik'asa fotodrafitrasa ary koa ny trano amin'ny serivisy isan-karazany. Izy koa dia niezaka nanangana fitaovana maoderina fitantanana maoderina, ary mifehy tanteraka ireo lalàna mifehy ny lalàna, satria io no fototra mafy orina amin'ny fizarana ara-tsosialy sy ara-toekarena.
Ho fanampin'ny andraikiny amin'ny maha filohan'ny filankevitra mpanatanteraka, ny Fiambonany dia miandraikitra ny fametrahana sy ny fiadidian'i Abu Dhabi Investment Authority ao amin'ny 1976. Ity fahefana ity dia manara-maso ny fitantanana ny vola ara-bola amin'ny emirate ho ampahany amin'ny vina stratejika ho an'ny fampandrosoana ny loharano ara-bola sy fitahirizana loharanom-bola azo antoka ho an'ny taranaka ho avy.
Iray amin'ireo tetik'asa fampandrosoana lehibe nataon'ny fiantraikany lalina lehibe nataon'ny Highness ny fametrahana ny serivisy ho an'ny asa sosialy sy ny tranombarotra ara-barotra, izay antsoina matetika hoe "Komity Sheikh Khalifa". Ny hetsika tao amin'ny departemanta dia nanampy tamin'ny fahombiazana tamin'ny fananganana asa fananganana an'habakabaka an'i Abu Dhabi.
Ilay Mahery Indrindra dia naka ny toeran'ny komandà ambony komandà ao amin'ny Tafika an'habakabaka UAE, izay nanome maso manokana azy ary nitombo ny fahalianan'ny tafika mitam-piadiana. Nandritra io vanim-potoana io, dia mitsambikina be ny haavon'ny famatsiana, ny fampiofanana ary ny fahaizana manentana ny teknolojia maoderina sy ny teknika mandroso izay niezahan'ny fahalehibeazany hanomezana ny sehatra rehetra an'ireny hery ireny.
Ny fandraisana anjara lehibe dia nomen'ny Avoy ao amin'ny faritra namolavola ny fankatoavana tafika, izay miorina amin'ny antokon'ny politika ambony indrindra ao amin'ny fanjakana. Ity politika faratampony ity dia mifototra amin'ny fampiharana ny fomba antonony, tsy fitsabahana amin'ny raharahan'ny hafa ary koa ny fanajana ny tombontsoan'ny tsirairay. Raha jerena amin'ireto farany ireto dia tsy nisy ezaka natao tamin'ny fandrafetana ny politikam-piarovana izay mitazona ny fahaleovan-tena, ny fiandrianana ary ny tombontsoan'ny fanjakana. Ity politika ity dia nandray anjara tamin'ny fametrahana ny Tafika an'habakabaka ao UAE izay nahazo ny fanajana an'izao tontolo izao.
Taorian'ny nandraisany ny asany dia ny drafitra stratejika voalohany ho an'ny governemanta UAE dia natomboka teo ambany fitondrany. Ankoatr'izay, ny Highness dia nanangana ihany koa ny hetsika ho amin'ny fampandrosoana ny fanam-pahefana mpanao lalàna hanovana ny fomba fiasa hifidy ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra nasionaly federaly amin'ny fomba iray izay hampifangaro ny fifidianana sy ny fanendrena ho dingana voalohany. Amin'ny fanaovana izany, dia amin'ny faran'ny andro no ahafahana mifidy mpikambana ao amin'ny filankevitra amin'ny alàlan'ny fifidianana mivantana.
Ny fahalehibiazany no liana amin'ny hetsika fanatanjahantena izay natao tany UAE, indrindra fa ny baolina kitra. Miezaka manohana azy ireo izy ary manome voninahitra ny ekipa ara-panatanjahantena eo an-toerana izay mahatratra ny zava-bita eo an-toerana, regional ary iraisam-pirenena.
I Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Ny fahalehibiazany Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum dia naka ny fahefan'ny lalampanorenana federaly ho filoha lefitra sy praiminisitra an'ny UAE tamin'ny Janoary 5 faha-2006, taorian'ny nifidianana azy ho mpikambana ao amin'ny filankevitra ambony federaly sy mpanapaka ny Emirates. Hatramin'ny nanendrena azy dia ny masoivoho federaly ao amin'ny UAE dia nahita maso ny fanafainganana ny tahan'ny fahombiazana ary koa fitomboana be ny isan'ny lahasan'ny governemanta eo an-toerana sy iraisam-pirenena raha jerena ny fifantohan'ny fahalehibeazana azy amin'ny famatsiam-bola amin'ny loharanom-bola federaly amin'ny fomba mahomby sy mahomby. .
Ankoatr'izay, ny Highness dia namoaka ny paikadin'ny governemanta federaly voalohany tany UAE tamin'ny aprily 17 th, 2007, izay mikendry indrindra hahatratra ny fampandrosoana maharitra sy mandanjalanja ny firenena, raha manara-maso ny fampitana ireo orinasam-panjakana federaly ary miantoka ny fandraisana andraikitra amin'ny fomba mangarahara ho an'ny ny soa ho an'ny firenena sy ny olom-pireneny.
Andraikitry ny Filoha lefitra UAE
Ny filoha lefitry ny UAE dia manatanteraka ny adidy rehetra amin'ny filohan'ny UAE amin'ny tsy fisian'ity antony ity.
Tantaran'ny fahalehibiazany Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Tamin'ny Janoary 4th, 2006, ny fahalehibeazany Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum dia nanjaka tao Dubai taorian'ny nahafatesan'i Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum.
Hatramin'ny naha-Filoha lefitra sy praiminisitra ny UAE, sy mpitondra an'i Dubai, Nivezivezy tamin'ny tahan'ny mahavariana ny hetsika voalohany.
Ny taona 2007 dia nanatri-maso zava-bita tokana ho an'i Sheikh Mohammed na eo an-toerana na any amin'ny faritra. Tamin'ny Aprily 17th, 2007, nanolotra ny drafitry ny tetikasan'ny Governemanta UAE i Sheikh Mohammed miaraka amin'ny tanjona hahatratra ny fampandrosoana maharitra manerana ny firenena, hampiasany amin'ny fomba mahomby kokoa ny famatsiam-bola ho an'ny federasiona ary hiantohana ny fahavitrihana, ny fandraisana andraikitra ary ny mangarahara manerana ny vondron-panjakana federaly.
Tanjona ny tanjona dia ny hampiroborobo ny fampandrosoana ny olombelona amin'ny fampiasam-bola amin'ny fampianarana sy ny fampiroboroboana ny fahalalana any amin'ny faritra amin'ny fambolena mpitarika ny ho avy eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny daholobe, ny fampiroboroboana ny fikarohana siantifika, manaparitaka fahalalana, mamporisika ny fitantanana orinasa, manome hery ny tanora, manavao ny foto-kevitra. kolontsaina, miaro ny lova ary mampiroborobo ny sehatry ny fahalalana eo amin'ireo kolontsaina samihafa.